အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
Republic of Indonesia (အင်္ဂလိပ်)Republik Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား)
ဆောင်ပုဒ်: Unity in Diversity
နိုင်ငံတော် သီချင်း: အင်ဒိုနီးရှားရာယ
Javanese (၄၀.၆%), Sundanese (၁၅%), Madurese (၃.၃%), Minangkabau (၂.၇%), Betawi (၂.၄%), Bugis (၂.၄%), Banten (၂%), Banjar (၁.၇%), အခြား (၂၉.၉%)
အစ္စလာမ် (၈၆.၁%), Protestant (၈.၇%), ဟိန္ဒူ (၁.၈%), အခြား (၃.၄%)
၁၇ ဩဂုတ် ၁၉၄၅
၁,၉၁၉,၄၄၀ km² (၇၃၅,၃၅၅ sq mi) (အဆင့်: ၁၆)
၂၃၇,၆၄၁,၃၂၆  (အဆင့် - ၄)
၁၃၄/km² (၃၄၇/sq mi) (အဆင့် - ၈၄)
US $၄၄၃ သိန်းကုဋေ (အဆင့် - ၂၀)
US $၁,၉၂၅ (အဆင့် - ၁၁၅)
မြင့် · ၁၀၇
Rupiah (IDR "Rp")
အဖုံဖုံ (UTC+၇ to +၉)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ /ˌɪndəˈniːʒə/ ( နားဆင်) ၏ ရုံးသုံးအမည်မှာ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီး တိုက်တစ်ခုထက်ပို၍ နယ်မြေရှိသော တစည်းတလုံးတည်းရှိသည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံ ဖြစ်ကာ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အဓိက တည်ရှိပြီး အချို့နယ်မြေများမှာ အိုရှန်းနီးယား တွင် ရှိသည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကြားတွင် တည်ရှိပြီး ကျွန်းပေါင်း တစ်သောင်းသုံးထောင်ကျော် ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။  စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၇၃၅,၃၅၈မိုင် (စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁,၉၀၄,၅၆၉ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားသည် ကုန်းမြေဧရိယာအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၄ ခုမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ဧရိယာ နှင့် ကုန်းမြေဧရိယာ ပေါင်းပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တမမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၂၆၁ သန်းမျှ ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အော်စထရိုနီးရှန်းနိုင်ငံ နှင့် မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အများစုရှိသော နိုင်ငံများတွင် လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်သော ဂျားဗားကျွန်းတွင် နိုင်ငံလူဦးရေ၏ တစ်ဝက်ကျော် နေထိုင်ကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရီပတ်ဘလစ်ကင် ပုံစံ အစိုးရရှိပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပါလီမန် နှင့် သမ္မတတို့ ပါဝင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပြည်နယ် ၃၄ ခုရှိပြီး ၅ ခုမှာ အထူးအုပ်ချုပ်ရေး အဆင့်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ ဂျကာတာမြို့ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယမြောက် လူဦးရေအများဆုံး မြို့ပြဒေသဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ ၊ အရှေ့တီမောနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတို့နှင့် ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ အခြားသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ပလောင်းနိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင် အက်ဒမန်ကျွန်းနှင့် နီကိုဘာကျွန်းတို့ ပါဝင်သည်။ လူဦးရေများပြားပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းသည့် ဒေသများရှိသော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြောလှသော တောရိုင်းမြေများသည် ဇီဝမျိုးကွဲများကို များပြားစွာ အထောက်အပံ့ ပေးထားနိုင်သည်။  နိုင်ငံအတွင်း သဘာဝ အရင်းအမြစ် အလျှံပယ်ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ရေနံ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ခဲမဖြူ၊ ကြေးနီ နှင့် ရွှေတို့ပါဝင်သည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းမှာ ဆန်စပါး၊ ဆီအုန်း၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ ကကေးအို ၊ ပရဆေး၊ ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင် နှင့် ရာဘာတို့ ထွက်ရှိသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြသည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုသည် ၇ ရာစုလောက်မှ စ၍ပင် ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသော ဒေသဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က သီရိဝိဟာရနိုင်ငံ နှင့် မာဂျာပါဟစ်နိုင်ငံ တို့သည် တရုတ်မင်းဆက်များ နှင့် အိန္ဒိယဘုရင့်နိုင်ငံတော်တို့အား ကုန်သွယ်မှု ပြုခဲ့ကြသည်။ ခရစ်တော်ပေါ်ပြီး အစောပိုင်းနှစ်များမှ စ၍ ဒေသခံ ဘုရင်တို့သည် နိုင်ငံခြားမှ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပုံစံတို့ကို ဆက်ခံယူခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်များ အဖြစ် စည်ပင်တိုးတက်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို မျက်စိကျသော နိုင်ငံရပ်ခြား အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ မွတ်ဆလင် ကုန်သည်များ နှင့် ဆူဖီပညာရှင်များက အစ္စလာမ်ဘာသာကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြပြီး  ဥရောပသားတို့က ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြကာ နယ်မြေသစ်စူးစမ်းရှာဖွေသော ခေတ်ကာလအတွင်း ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်ကျွန်းများဖြစ်ကြသော မာလူကူးကျွန်းများပေါ်တွင် ကုန်သွယ်ရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြကာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ အမ်ဘိုးအီးနား နှင့် ဘာတာဗီးယားတို့ကို ဒတ်ချ်လူမျိုးတို့က ကိုလိုနီအဖြစ် သွတ်သွင်းခဲ့သည်က အစပြု၍ နောက်ဆုံးတွင် တီမော နှင့် အနောက်နယူးဂီနီ အပါအဝင် ကျွန်းစုအားလုံးကို ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိသျှတို့က ကိုလိုနီအဖြစ် သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရာပေါင်းများစွာသော ဒေသခံလူမျိုးများနှင့် ဘာသာစကားများရှိပြီး အကြီးမားဆုံးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးမှာ ဂျာဗားလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဘာသာစကား၊ လူအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှု၊ မွတ်စလင်အများစုရှိသော နိုင်ငံအတွင်း ဘာသာပေါင်းစုံ ကိုးကွယ်နေမှု၊ ကိုလိုနီပြုခံရခြင်းသမိုင်းနှင့် ပုန်ကန်တော်လှန်ခြင်း စသည်တို့မှ တဆင့် အားလုံး ဝေမျှထားသော အမျိုးသားလက္ခဏာရပ်တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော် ဆောင်ပုဒ်မှာ "ညီညွတ်ခြင်းနှင့် မတူကွဲပြားခြင်း ၊ စာစကားအားဖြင့်၊ အားလုံး သို့သော် တစ်ခုတည်း" ဟူ၍ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံကို ပုံဖော်ပေးနေသော မတူကွဲပြားခြင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် အားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၆ ခုမြောက် အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် တွင် ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား ကွာခြားမှုနှုန်းကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တမမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ နှင့် ဂျီ၂၀ တို့တွင် ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ဘက်မလိုက်နိုင်ငံများ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း၊ အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၊ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးနိုင်ငံများအဖွဲ့၊ အာရှ အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် နှင့် အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ တို့တွင် စတင်တည်ထောင်သောနိုင်ငံ တစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၄.၁ ပါတီများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ
၄.၂ နိုင်ငံရေး နယ်နိမိတ်များ
၆ လူဦးရေပျံနှံ့ နေထိုင်မှု
၆.၁ လူမျိုးနှင့် ဘာသာစကားများ
၇.၁ အနုပညာနှင့် ဗိသုကာပညာ
၇.၉ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရုံးပိတ်ရက်များ
"အင်ဒိုနီးရှား" ဆိုသော အမည်သည် ဂရိဘာသာစကား အင်ဒို (Indos) နှင့် နီဆော့စ် (nesos) တို့မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယကျွန်းများ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။  ထိုအမည်သည် ၁၈ ရာစု မှ အစပြုခဲ့ပြီး လွတ်လပ်သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မထူထောင်ခင် ရှေးအတီတေကပင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။၁၈၅၀ တွင် အင်္ဂလိပ် လူမျိုးစုဗေဒပညာရှင် ဂျော့ရှ်ဝင်ဆာအားရ်မှ အိန္ဒိယကျွန်းစုများပေါ်တွင် နေထိုင်သူများအား အင်ဒုနီးရှန်း (Indunesians) ဟုလည်းကောင်း မလာယန်ကျွန်းဆွယ်များပေါ်တွင် နေထိုင်သူများအား မလာယုနီးရှန်း (Malayunesians) ဟုလည်းကောင်း သူနှစ်သက်သည့် အသုံးအနှုန်းကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ထိုဂျာနယ်၌ပင် သူ၏ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သော ဂျိမ်းစ်ရစ်ချက်ဆန် လိုဂန် မှ အိန္ဒိယကျွန်းစု ဆိုသော အမည်အား အင်ဒိုနီးရှား ဟု အဓိပ္ပာယ်တူ အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဒတ်ချ်ပညာရှင်တို့၏ အရှေ့အင်ဒီ နှင့် ပတ်သက်သော ဂျာနယ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှား ဆိုသောအမည်ကို အသုံးမပြုချင်ကြဘဲ မလေးကျွန်းစုများ နှင့် နယ်သာလန် အရှေ့အင်ဒီဆိုသော အမည်များကိုသာ ပိုမိုနှစ်ခြိုက်ကြပြီး ရေပန်းစားသော အသုံးအနှုန်းမှာ အင်ဒီ အရှေ့ပိုင်း နှင့် အင်ဆူလင်ဒီ (Insulinde) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များ၏ နောက်ပိုင်းတွင် နယ်သာလန်ပြင်ပရှိ ပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းကြား၌ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုသောအမည်မှာ ပို၍ အသုံးများလာခဲ့ကြပြီး ဒေသခံ မျိုးချစ်များက နိုင်ငံရေး အသုံးအနှုန်းအဖြစ် မွေးစားခဲ့ကြသည်။  ဘာလင်တက္ကသိုလ်မှ အဒေါ့ဖ် ဘတ်ရှန်း မှ ၎င်း၏စာအုပ် "အင်ဒိုနီးရှား သို့မဟုတ် မလေးကျွန်းစုမှကျွန်းများ ၁၈၈၄-၁၈၉၄" မှ တဆင့် ထိုအမည်ကို လူသိများလာစေခဲ့သည်။ ဒေသခံ ပညာရှင်များထဲမှ ထိုအမည်ကို စတင် အသုံးပြုသူမှာ ကီ ဟာဂျာ ဒီဝမ်တာရာ ဖြစ်ပြီး ၁၉၁၃ ခုနှစ်၌ သူသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ "အင်ဒိုနီးရှား သတင်းစာတိုက်" အမည်ဖြင့် သတင်းစာတိုက်တစ်ခု ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဗောရောဗုဓော ဘုရားတွင် ထွင်းထုထားသော ဗောရောဗုဓော သင်္ဘော အေဒီ ၈၀၀။ ကျွန်းစုများမှ သင်္ဘောများသည် အာဖရိက အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းသို့ အေဒီ ၁ ရာစုခန့်ကပင် ကုန်သွယ်ရန် အတွက် သွားလာခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁.၅ သန်း နှင့် ၃၅,၀၀၀ နှစ် ကြားတွင် ဟိုမို အီရပ်တပ်စ် ဟု သိကြသော ဂျားဗားလူများ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုများတွင် နေထိုင်ကြသည်ဟု ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့် လက်နက်ကိရိယာ အကြွင်းအကျန်များမှ ဖော်ပြနေသည်။ ဟိုမိုဆေးပီးယန်းတို့သည် ထိုဒေသသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၅,၀၀၀ ခန့်က ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။  ယနေ့ခေတ်လူများ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အော်စထရိုနီးရှန်းလူမျိုးများသည် အရှေ့တောင်အာရှသို့ ယနေ့ခေတ် ထိုင်ဝမ်နေရာမှ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဘီစီ ၂,၀၀၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကျွန်းစုများတလျှောက် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြကာ ဒေသရင်း မီလာနီးရှန်းလူမျိုးများအား အရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့ တွန်းပို့ခဲ့ကြသည်။  စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ရန် ကောင်းသော အခြေအနေနှင့် ဘီစီ ၈ ရာစုမှ စ၍ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်လာမှုတို့ကြောင့် ကျေးရွာများ၊ မြို့များ နှင့် နိုင်ငံငယ်များ အေဒီ ၁ ရာစုတွင် စတင်ထွန်းကားလာခဲ့ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏ မဟာဗျူဟာကျသော ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလမ်းပေါ်ရှိ နေရာသည် ကျွန်းများအချင်းချင်းကြားနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးကို အားပေးခဲ့ပြီး အိန္ဒိယဘုရင်နိုင်ငံများ နှင့် တရုတ်မင်းဆက် အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံများသို့ အဆက်အသွယ်ပြုနိုင်ခဲ့ကာ ခရစ်တော်မပေါ်မီ ရာစုနှစ်များကပင် ကုန်သွယ်ရေးကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။  ထိုအချိန်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရေးသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သမိုင်းကို ပုံဖော်ပေးခဲ့သည်။ 
အေဒီ ၇ ရာစုမှ အစပြု၍ အင်အားကြီးသော သီရီဝိဇယ ရေကြောင်းနိုင်ငံတော်သည် စည်ပင်ထွန်းကားလာခဲ့ပြီး ကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမှာ ၎င်းတို့နှင့်အတူ တင်သွင်းလာသော ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အေဒီ ၈ ရာစုနှစ် နှင့် ၁၀ ရာစုနှစ်ကြားတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆေးလန်ဒရာ ဘုရင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ မာတရန် ဘုရင့်နိုင်ငံတော်တို့ ဂျားဗားကျွန်း ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားလာခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ ချန်ထားရစ်ခဲ့သည်မှာ ကြီးမြတ်သော ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများ ဖြစ်ကြသည့် ဗောရောဗုဓော ၊ ဆီဝူး နှင့် ပရမ်ဘနန် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအချိန်သည် ရှေးဟောင်းဂျားဗားတွင် ဟိန္ဒူ နှင့် ဗုဒ္ဓအနုပညာတို့၏ ပြန်လည်စည်ပင်ထွန်းကားလာသော ခေတ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၁၀ရာစု၏ ပထမ လေးပုံတစ်ပုံတွင် အွမ်ပူးဆင်းဒေါက်မှ ဘုရင့်နိုင်ငံတော်၏ ဗဟို ကို ဂျားဗားကျွန်း အလယ်ပိုင်း မာတရန် ဒေသမှ အရှေ့ဂျားဗားရှိ ဘရန်တပ်စ် မြစ်ဝှမ်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကာ အစ်စယားနားမင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။  ထို့နောက်တွင် ဟိန္ဒူ-ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်များ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွန်း ပြိုပျက်ခဲ့ပြီး အဲလင်ဂါအုပ်ချုပ်သော ကာဟူးရီပန်တိုင်းပြည်မှစ၍ ကာဒီရီ နှင့် ဆင်းဟာဆာရီတိုင်းပြည် တို့ အထိဖြစ်သည်။ အနောက်ဂျားဗားတွင် ဆန်ယန်တာပက် ကျောက်စာ အရ ၁၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ဆွန်ဒါတိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဘာလီတွင်မူ ဝါမာဒေဝ မင်းဆက်မှ ဘာလီတိုင်းပြည်ကို ၁၀ ရာစုတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဟိန္ဒူတို့၏ မာဂျာပါဟစ် တိုင်းပြည်အား ၁၃ ရာစု နှောင်းပိုင်းတွင် ဂါဂျာ မာဒါ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အရှေ့ဂျားဗား၌ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် ယနေ့ခေတ် အင်ဒိုနီးရှား၏ နေရာ အတော်များများသို့ သက်ရောက်ခဲ့သည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုများ အတွင်း မွတ်စလင်များ နေထိုင်မှု၏ အစောဆုံး အထောက်အထားမှာ ၁၃ ရာစု ဆူမတြာကျွန်း မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်ကုန်သည်များသည် အရှေ့တောင်အာရှမှတဆင့် အစ္စလာမ်ခေတ်တွင် ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။  ထိုကျွန်းစုများ၏ အခြားအပိုင်းများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာကို တဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြပြီး ၁၆ ရာစု အကုန်တွင် ဂျားဗားကျွန်း နှင့် ဆူမကြာကျွန်းတို့၌ အဓိက ဘာသာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နေရာဒေသ အတော်များများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် လက်ရှိ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများအား ဖုံးလွှမ်းရောနှောလာခဲ့ပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ အဓိက ဖြစ်လာခဲ့ကာ အထူးသဖြင့် ဂျားဗားကျွန်းတွင် ဖြစ်သည်။ 
၁၈၃၀ ဂျားဗားစစ်ပွဲအပြီးတွင် ဒီပိုနီဂိုရို မင်းသားအား ဗိုလ်ချုပ်ဒီကောက်ထံ ဖမ်းဆီးပေးပို့စဉ်
ဥရောပသားတို့နှင့် ကျွန်းစုနေ လူမျိုးများ ပုံမှန် အဆက်အသွယ်ပြုကြခြင်းသည် ၁၅၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီကုန်သည် ဖရန်စစ္စကို ဆေးဟုမ်း မှ ဇာတိပ္ဖိုလ်၊ လေးညှင်း နှင့် ကရဝေးတို့အား မာလူကူးကျွန်းတွင် တစ်ဦးတည်း ချုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကြိုးစားရာမှ စခဲ့သည်။ ဒတ်ချ် နှင့် ဗြိတိသျှကုန်သည်တို့သည် ၎င်း၏ နောက်မှ လိုက်လာခဲ့သည်။ ၁၆၀၂ တွင် ဒတ်ချ်တို့မှ ဒတ်ချ်အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ်များတွင် ဒတ်ချ်တို့မှ အမ်ဘိုးအီးနား နှင့် ဘာတေးဗီးယားတို့တွင် ခြေကုပ်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၇ ရာစုနှင့် ၁၈ ရာစု နှစ်များတွင် ထိုကုမ္ပဏီသည် ကျွန်းစုများအတွင်း လွှမ်းမိုးသော အင်အားကြီး ဥရောပ အဖွဲ့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒတ်ချ်အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီသည် ဒေဝါလီခံခဲ့ရပြီးနောက် ၁၈၀၀ တွင် တရားဝင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ကာ ဒတ်ချ်အစိုးရမှ ဒတ်ချ်အရှေ့အင်ဒီ အဖြစ် နိုင်ငံပိုင် ကိုလိုနီ ထူထောင်ခဲ့သည်။  ဒတ်ချ်တို့၏ ကိုလိုနီခေတ် တလျှောက်တွင် ဒတ်ချ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုသည် ကမ်းရိုးတန်း အခြေစိုက်နေရာများမှ အပ အခြားနေရာများတွင် အားနည်းခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတွင်မှ ဒတ်ချ်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုသည် အင်ဒိုနီးရှား၏ လက်ရှိ နယ်နိမိတ်သို့ ဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျပန်တို့၏ သိမ်းပိုက်မှုမှ ဒတ်ချ်တို့၏ အုပ်စိုးမှုအား အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ယခင်က ချုပ်ငြိမ်းခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ပြန်လည် အသက်ဝင်စေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်း ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာများ အရ ဂျပန်တို့ သိမ်းပိုက်ထားစဉ်အတွင်း လူ၄ သန်းမှာ အစာရေစာ ငတ်မွတ်မှုနှင့် အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေမှုတို့ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည် ဟု သိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တည်ထောင်သူ နှင့် ပထမဆုံး သမ္မတ ဆူကာနို
ဂျပန်တို့ လက်နက်ချပြီး ၂ ရက်အကြာတွင် ဩဇာတိက္ကမ ကြီးမားသော အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဆူကာနိုနှင့် မိုဟာမက် ဟတ်တာ တို့သည် ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၇ တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို ကြေညာခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှား လွတ်လပ်ရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ကော်မတီမှ သမ္မတ နှင့် ဒုတိယ သမ္မတ အဖြစ် အသီးသီး ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ နယ်သာလန်မှ ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ပြန်လည် အသက်သွင်းရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် သံတမန် ရေးအရ ညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ဖိအားကြောင့် ဒတ်ချ်တို့မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ် ပြုခဲ့ရသော်လည်း  နယ်သာလန် နယူးဂီနီ မပါဝင်ခဲ့ပေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် နယူးယောက်သဘောတူညီချက် နှင့် အငြင်းပွားမှု အပြီးမှသာလျှင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အတွင်းသို့ နယ်သာလန် နယူးဂီနီအား ပြန်လည် သွတ်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂမှ ချမှတ်ထားသော ၁၉၆၉ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် အက်ဥပဒေ အရ ပါပူအာ ပဋိပက္ခကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။ ၄ နှစ်တာ တိုက်ပွဲဝင် ကာလအတွင်း အဓိက ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး နှင့် ဂိုဏ်းဂဏ ကွဲပြားမှုများ ရှိသော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ညီညွတ်ရေး ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် ဆူကာနိုသည် အင်ဒိုနီးရှားအား ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အဖြစ်မှ အာဏာရှင်နိုင်ငံ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး သူ၏ ဩဇာအာဏာကို ဆန့်ကျင့်ဘက် အဖွဲ့နှစ်ခု ဖြစ်သော စစ်တပ် နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကွန်မြူနစ် ပါတီ တို့ အကြား မျှခြေယူပြီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။  ၁၉၆၅ စက်တင်ဘာ ၃၀ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုအား စစ်တပ်မှ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုအာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုအတွက် အင်ဒိုနီးရှား ကွန်မြူနစ်ပါတီအား အပြစ်တင်ခဲ့ပြီး စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကာ ကွန်မြူနစ်များ၊ တရုတ်လူမျိုးများ၊ လက်ဝဲဝါဒီဟု စွပ်စွဲခံရသူများကို ကြမ်းတမ်းစွာ သတ်ဖြတ်ဖယ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အများစု လက်ခံထားသော ကိန်းဂဏန်း အရ လူ ၅၀၀,၀၀၀ နှင့် ၁ သန်းကြား သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်ဟု ခန့်မှန်းကြပြီး အချို့မှ ၂ သန်းမှ ၃ သန်းအထိ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။  စစ်တပ်၏ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူဟာတိုမှ နိုင်ငံရေးအရ အားနည်းနေသော ဆူဟာတိုအား အကွက်ရွှေ့ကာ ၁၉၆၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် တရားဝင် ခန့်အပ်သော သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ နယူးအော်ဒါအစိုးရ အား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ထောက်ခံခဲ့ပြီး  ၎င်းတို့မှ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား အားပေးခဲ့သဖြင့် နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုအတွင်း စီးပွားရေး သိသာစွာ တိုးတက်လာမှု အတွက် အဓိက အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆူဟာတို၏ အစိုးရအား အများစုမှ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း နှင့် နိုင်ငံရေးအရ အတိုက်အခံများကို ဖိနှိပ်ခြင်း တို့အတွက် စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၁၉၉၇ အာရှငွေကြေးဂယက်၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံး ခံစားရသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။. ထို့အတွက်ကြောင့် နယူးအော်ဒါ အစိုးရအား မကျေနပ်မှုများ များပြားလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် အုံနှင့်ကျင်းနှင့် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ နောက်ဆုံး ၁၉၉၈ မေလ ၂၁ ရက်တွင် ဆူဟာတို နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရသည်။  ၁၉၉၉ တွင် အရှေ့တီမောမှ အင်ဒိုနီးရှားမှ ခွဲထွက်ရန် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ခွဲထွက်ရန် ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပြီး အင်ဒိုနီးရှားတို့၏ ၂၅ နှစ်ကြာ စစ်ဘက်ကျူးကျော်မှု အပြီးတွင် ဖြစ်ကာ ထိုအဖြစ်အပျက်အား နိုင်ငံတကာမှ အရှေ့တီမောနိုင်ငံသားတို့အား ဖိနှိပ်မှုအဖြစ် ဝိုင်းဝန်းရှုံ့ချခဲ့ကြသည်။  ဆူဟာတို ပြုတ်ကျပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ရာ၌ ဒေသတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များကို ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး သမ္မတ တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှုများ၊ လူထု အုံကြွမှုများ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ နှင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးခဲ့သော်လည်း လတ်တလောနှစ်များတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည် အလွန်ပင် ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ မတူညီသော ဘာသာရေး နှင့် လူမျိုးစု အစုအဖွဲ့များကြားတွင် အများအားဖြင့် အေးချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ကြသော်လည်း ဂိုဏ်းဂဏကွဲပြားမှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများမှာ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်။  ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အာချေးရှိ ခွဲထွက်မှု အတွက် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအား နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အိုရှန်းနီးယားတွင် အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ပါပူအာပြည်နယ်ရှိ ပွန်ချပ်ဂျာယား
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် တောင်လတ္တီကျု ၁၁° မှ မြောက်လတ္တီကျု ၆° အတွင်း၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၉၅° မှ ၁၄၁° အတွင်း တည်ရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ကျွန်းစုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အရှေ့မှ အနောက်သို့ ၃,၁၈၁မိုင် (၅,၁၂၀ ကီလိုမီတာ) နှင့် မြောက်မှတောင်သို့ ၁,၀၉၄မိုင် (၁,၇၆၀ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသည်။  နိုင်ငံတော် မြေပုံရေးဆွဲရေးအေဂျင်စီမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်းတာလေ့လာမှုများအရ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကျွန်းပေါင်း ၁၃,၄၆၆ ကျွန်း ရှိပြီး အီကွေတာ၏ နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ဖြန့်ကျက် တည်ရှိကာ ကျွန်း ၆,၀၀၀ ကျော်တွင် လူနေထိုင်ကြသည်။  အကြီးဆုံးကျွန်းများမှာ ဆူမတြာကျွန်း၊ ဂျားဗားကျွန်း၊ ဘော်နီယိုကျွန်း (ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ မလေးရှားနိုင်ငံ တို့နှင့် အတူ ပိုင်ဆိုင်သည်။) ၊ ဆူလာဝေစီကျွန်း နှင့် နယူးဂီနီကျွန်း (ပါပူအာနယူးဂီနီ နှင့် အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်သည်။) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်တွင် မလေးရှားနှင့် လည်းကောင်း ၊ နယူးဂီနီကျွန်းပေါ်တွင် ပါပူအာ နယူးဂီနီနိုင်ငံ နှင့် လည်းကောင်း၊ တီမောကျွန်းပေါ်တွင် အရှေ့တီမောနိုင်ငံ နှင့် လည်းကောင်း ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ် ချင်းထိစပ်လျက် ရှိသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ နှင့် ပလောနိုင်ငံ တို့နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ကျဉ်းမြောင်းသော ရေလက်ကြားဖြင့် ပင်လယ်ရေနယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေပြီး တောင်ဘက်တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် ပင်လယ်ရေပြင်နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက် ရှိသည်။
အရှေ့ဂျားဗားရှိ ဆမယ်ရူးတောင်နှင့် ဘရိုမိုတောင်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မီးတောင်များ အလှုပ်ရှား အတက်ကြွဆုံး နိုင်ငံများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
၁၆,၀၂၄ပေ (၄,၈၈၄ မီတာ) မြင့်သော ပွန်ချပ်ဂျာယားတောင်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီး ဆူမတြာကျွန်းရှိ တိုဘာရေကန်သည် အကြီးဆုံးရေကန်ဖြစ်ကာ ၄၄၂ စတုရန်းမိုင် (၁,၁၄၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏ အကြီးဆုံးမြစ်များမှာ ကာလီမန်တန် နှင့် နယူးဂီနီတို့တွင် ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ကာပူဝါမြစ်၊ ဘာရီတိုမြစ်၊ မမ်ဘယ်ရာမိုမြစ်၊ ဆီပစ်မြစ် နှင့် မဟာကမ်မြစ်တို့ ပါဝင်ကာ ထိုမြစ်တို့သည် ကျွန်းအတွင်း မြစ်အနီး နေထိုင်ကြသူများအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြသည်။ 
ကာလီမန်တန် နှင့် ဆူမတြာတို့တွင် တွေ့ရသော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ မိုးသစ်တော
အီကွေတာတလျှောက်တွင် တည်ရှိသော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သမမျှတသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် စိုစွတ်သော ရာသီဥတု နှင့် ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတု ဟူ၍ ရာသီဥတု နှစ်မျိုးသာ ရှိပြီး နွေရာသီ နှင့် ဆောင်းရာသီကဲ့သို့သော ရာသီဥတုမျိုးမရှိပေ။  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ နေရာတော်တော်များများတွင် ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုသည် ဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလ အတွင်း ဖြစ်ပြီး စိုစွတ်သော ရာသီဥတုသည် နိုဝင်ဘာလ မှ မတ်လအတွင်း ဖြစ်သည်။  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုမှာ လုံးဝနီးပါး အပူပိုင်းဖြစ်ပြီး အဓိက ကျွန်းတော်တော်များများတွင် အပူပိုင်းမိုးသစ်တောရာသီဥတု ကြီးစိုးသည်။ ဂျားဗားကျွန်း၏ မြောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း၊ ဆူလာဝေစီကျွန်း၏ တောင်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ဘာလီကျွန်းတို့တွင် အပူပိုင်းမုတ်သုံ ရာသီဥတု ရှိပြီး ဂျားဗားအလယ်ပိုင်း အချို့နေရာများ၊ ဂျားဗားအရှေ့ပိုင်းမြေနိမ့်ဒေသ၊ ပါပူအာ ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်း နှင့် လုံဘောက်ကျွန်း အရှေ့ဘက်ရှိ ကျွန်းငယ်များတွင် ဆာဗားနား ရာသီဥတု ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေ ၄,၃၀၀ မှ ၄,၉၀၀ ကြား (မီတာ ၁,၃၀၀ မှ မီတာ ၁,၅၀၀ကြား) မြင့်သော တောင်ကုန်း ထူထပ်သော နေရာများတွင် အေးမြသော ရာသီဥတု ရှိသည်။ မိုးသစ်တော ရာသီဥတုနှင့် နီးစပ်သော ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင် သမုဒ္ဒရာရာသီဥတု (ကိုပန်ရာသီဥတု အမျိုးအစား "Cfb") ပို၍ ရှိတတ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးရေချိန် တသမတ်တည်း ရရှိသည်။ အပူပိုင်း မုတ်သုံရာသီဥတု နှင့် ဆဗားနား ရာသီဥတု တို့နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိပြီး ထင်ရှားသော ခြောက်သွေ့ရာသီဥတုရှိသည့် ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင် အပူပိုင်းဆန်သော ကုန်းမြင့် ရာသီဥတု (ကိုပန်ရာသီဥတုအမျိုးအစား "Cwb") ရှိတတ်သည်။
လက်ဆား ဆွန်ဒါကျွန်းများရှိ ရင်ကာကျွန်း။ ဩစတြေးလျနှင့်နီးသော နူဆာ တန်ဂါရာ ကျွန်းအပါအဝင် နှင့် ဂျားဗားကျွန်း၏ အရှေ့ဘက်စွန်း တို့သည် ခြောက်သွေ့နေတတ်သည်။
ကာလီမန်တန် နှင့် ဆူမတြာကျွန်း ဒေသများသည် ရာသီဥတု တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မိုးရေချိန် နှင့် အပူချိန် အနည်းငယ်သာ ကွာခြားလေ့ရှိပြီး အခြားကျွန်းများ ဖြစ်သော နူဆာ တန်ဂါရာတို့သည် ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုတွင် မိုးခေါင်၍ အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့ပြီး စိုစွတ်သော ရာသီဥတုတွင် ရေကြီးတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် အနောက် ဆူမတြာ၊ အနောက် ကာလီမန်တန်၊ အနောက်ဂျားဗျား နှင့် ပါပူအာ တို့တွင် မိုးရွာကျမှု အလွန်အမင်း များပြားသည်။ ဆူလာဝေဆီ၏ တစ်ချို့အပိုင်းများနှင့် ဆွန်ဘာကဲ့သို့သော ဩစတြေးလျနှင့် နီးစပ်ေသာ အပိုင်းများသည် ခြောက်သွေ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှား ဧရိယာ၏ ၈၁% ခန့်ရှိသော တသမတ်တည်းရှိသည့် ပူနွေးသော ရေထုကြောင့် ကုန်းမြေပေါ်ရှိ အပူချိန်သည် တသမတ်တည်း ရှိတတ်သည်။ ပျမ်းမျှ အပူချိန်မှာ ကမ်းရိုးတန်းလွင်ပြင်တွင် ၂၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၈၂.၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့် တောင်ကုန်းဒေသတို့တွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၆ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၇၈.၈ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)၊ မြင့်မားသော တောင်ကုန်းဒေသများတွင် ၂၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၇၃.၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) ရှိသည်။ ပျမ်းမျှ စိုထိုင်းဆမှာ ၇၀% မှ ၉၀% အတွင်း ရှိသည်။ လေတိုက်ခတ်မှုသည် အတန်အသင့်သာ ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်းဆနိုင်သည်။ ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလ အထိ မုတ်သုံလေသည် တောင်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တို့မှ တိုက်ခတ်ပြီး နိုဝင်ဘာလမှ မတ်လအထိ အနောက်မြောက်ဘက်မှ တိုက်ခတ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှား ရေပြင်တွင် ရွက်လွှင့်သွားလာသူများအတွက် တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းနှင့် ကြီးမာသော မုန်တိုင်းကြီးများ၏ အန္တရာယ်မှာ နည်းပါးသော်လည်း အဓိကအန္တရာယ်မှာ လုံဘောက် နှင့် ဆေ့ရပ် ရေလက်ကြားတို့မှ ရေစီးသန်သော ရေစီးကြောင်းများ ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိ အဓိကမီးတောင်များ။ အင်ဒိုနီးရှားသည် ပစိဖတ် အနားပတ်လည် ငလျင်ရပ်ဝန်းဒေသတွင် ရှိသည်။
တက်တိုနစ် သဘော အရ အင်ဒိုနီးရှားသည် အလွန်ပင် မတည်ငြိမ်သော ဒေသဖြစ်သဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် များပြားလှစွာသော မီးတောင်များနှင့် မကြာခဏ လှုပ်ရှားသော မြေငလျင်များ ရှိသည်။ ၎င်းသည် အင်ဒို-ဩစတြေးလျ ကျောက်လွှာထု နှင့် ပစိဖိတ် ကျောက်လွှာထုတို့ ယူရေးရှန်းကျောက်လွှာထုအောက်သို့ တိုးဝင်ပြီး မြေအောက် ၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၂ မိုင်) ခန့်တွင် အရည်ပျော်နေသော ပစိဖိတ် အနားပတ်လည် ငလျင်ရပ်ဝန်းတွင် တည်ရှိသည်။ မီးတောင်များသည် ဆူမတြာ၊ ဂျားဗား၊ ဘာလီ၊ နူဆာတန်ဂရာ မှ တဆင့် မာလူကူးရှိ ဘန်ဒါကျွန်းများ၊ ထိုမှတဆင့် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ဆူလာဝေစီ အထိ ဆက်တိုက်ရှိသည်။  မီးတောင် ၄၀၀ တွင် ၁၃၀ မှာ မီးတောင်ရှင်များ ဖြစ်သည်။  ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကြားတွင် မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှု ၂၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အများစုမှာ ဂျားဗားတွင် ဖြစ်သည်။ မီးတောင်ပြာများကြောင့် မြေဩဇာကောင်းမွန်သော မြေကြီးများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး (ဂျားဗားနှင့် ဘာလီတို့တွင် သမိုင်းအရ လူနေသိပ်သည်းရသည့် အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်။) အချို့ဒေသများတွင်မူ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် အခြေအနေကို ခန့်မှန်းမရ ဖြစ်စေသည်။
ယနေ့ခေတ် တိုဘာရေကန် နေရာတွင် ဘီစီ ၇၀,၀၀၀ ခန့်က အလွန်ကြီးမားသော ဧရာမ မီးတောင်ကြီးတစ်ခု ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅ သန်းအတွင်း ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်း ပြာများ ဖုံးလွှမ်းကာ နေရောင်ခြည်ကို ကာဆီးသဖြင့် မီးတောင်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်သော ဆောင်းရာသီဥတု နှင့် အေးမြသော ရာသီဥတု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး လူတို့၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွင် မျိုးရိုးဗီဇအပြောင်းအလဲကို အဟန့်အတား ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုပေါက်ကွဲမှု၏ သက်ရောက်မှု အတိအကျကိုမူ အငြင်းပွားနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။  ယနေ့ခေတ်၏ အပြင်းထန်ဆုံးသော မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ၂ ခုသည် အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခင် နှစ် ၁၀,၀၀၀ အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးသော ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည့် ၁၈၁၅ တမ်ဘိုရာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူပေါင်း ၉၂,၀၀၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီး မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှ ထွက်လာသော ပြာမှုန့်များသည် အရှေ့တောင်အာရှပေါ်တွင် စောင်ဖြင့်အုပ်ထားသည့်ပမာ လွှမ်းခြုံသွားကာ တစ်ပတ်ခန့်မျှ အမှောင်ကျခဲ့သည်။ မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းအား ၁၈၁၆ ခုနှစ်တွင် နွေရာသီ မရှိသောနှစ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၈၈၃ ကရာကတောင်း မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသည် သမိုင်းတင်ပြီးခေတ်အတွင်း အကျယ်လောင်ဆုံးသော အသံ ကို ပေါ်ထွက်စေခဲ့ကာ ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ၎င်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ဆူနာမီ ကြောင့် လူပေါင်း ၄၀,၀၀၀ သေဆုံးခဲ့သည်။ ပေါက်ကွဲပြီး နှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။  ငလျင်နှင့် ပတ်သက်သော လတ်တလော ကပ်များမှာ ၂၀၀၄ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ငလျင် နှင့် ဆူနာမီ ဖြစ်ပြီး မြောက်ဆူမတြာတွင် လူပေါင်း ၁၆၇,၇၃၅ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ကာ အခြားတစ်ခုမှဦ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ယော့ယာကာတာ ငလျင်ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှား ဒေသိယ မျိုးစိတ်များ။ ထိပ်ဆုံးမှစ၍ လက်ယာရစ် : Rafflesia arnoldii ၊ လူဝံ၊ greater bird-of-paradise နှင့် ကိုမိုဒိုနဂါး.
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အရွယ်အစား၊ အပူပိုင်း ရာသီဥတုနှင့် ကျွန်းပုံစံရှိသော ပထဝီဝင်တို့ကြောင့် ဇီဝမျိုးကွဲ အမြောက်အမြားကို ထောက်ပံ့ပေးထားနိုင်သည်။ ၎င်း၏ ဒေသရင်း အပင်များနှင့် ဒေသရင်းတိရစ္ဆာန်များသည် အာရှ နှင့် ဩစတြေးလျေးရှန်း မျိုးစိတ်များ ရောနှောထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆွန်ဒါ ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်း ပေါ်တွင်ရှိသော ကျွန်းများ (ဆူမတြ၊ ဂျားဗား၊ ဘော်နီယို၊ ဘာလီ) တို့သည် ယခင်က အာရှကုန်းမကြီးနှင့် ဆက်နေကြသဖြင့် အာရှမျိုးရင်း တိရစ္ဆာန် မြောက်များစွာ ရှိသည်။ အကောင်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဆူမတြာကျား၊ ကြံ့၊ လူဝံ၊ အာရှဆင် နှင့် ကျားသစ်တို့မှာ တစ်ချိန်က အရှေ့ဘက် ဘာလီအထိပင် အများအပြား ပျံ့နှံ့နေခဲ့သော်လည်း အကောင်ရေနှင့် ပျံ့နှံ့မှုမှာ လတ်တလောတွင် သိသာစွာ ကျဆင်းလာသည်။ ဆူမတြာ နှင့် ကာလီမန်တန်တို့တွင် အာရှမျိုးစိတ်များ ပို၍များသည်။ သစ်တောများသည် နိုင်ငံ၏ ၇၀% ကို ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည်။  သို့သော်လည်း အရွယ်အစားအားဖြင့် သေးငယ်ပြီး လူနေထူထပ်သော ဂျားဗားတွင် လူတို့နေထိုင်ရန် နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရန် အတွက် သစ်တောများစွာကို ခုတ်ထွင်ဖယ်ရှားပြီး ဖြစ်သည်။ တိုက်ကြီးများ၏ ကုန်းမြေထုမှ ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းက ကွဲထွက်လာခဲ့သော ဆူလာဝေစီ၊ နူဆာ တန်ဂါရာ နှင့် မာလူကူး တို့တွင် ၎င်းတို့ဘာသာ သီးသန့်ဖြစ်နေသော ဒေသရင်း အပင်များ နှင့် တိရစ္ဆာန်များ ရှိကြသည်။ ပါပူအာသည် ဩစတြေးလျ ကုန်းမကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သဖြင့် သီးသန့် ဒေသရင်း အပင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ရှိပြီး ဩစတြေးလျနှင့် နီးစပ်စွာ အမျိုးတော်ကြကာ ငှက်မျိုးစိတ် ၆၀၀လည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဩစတြေးလျပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် ဒေသိယ မျိုးစိတ် အများဆုံးရှိရာ ဒေသဖြစ်ပြီး ငှက်မျိုးစိတ် ၁,၅၃၁ ခုအတွင်းမှ ၃၆% နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ် ၅၁၅ခု အတွင်းမှ ၃၉% တို့သည် ဒေသိယမျိုးစိတ်များ ဖြစ်သည်။အင်ဒိုနီးရှား၏ ၈၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ (၅၀,၀၀၀ မိုင်) ရှည်လျားသော ကမ်းရိုးတန်းအား အပူပိုင်းပင်လယ်များမှ ဝန်းရံလျက် ရှိသည့်အတွက် နိုင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးကွဲများ အလွန်များပြားခြင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနေသကဲ့သို့ပင် ရှိသည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပင်လယ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဂေဟစနစ် အမျိုးမျိုး ရှိကာ ပင်လယ်ကမ်းခြေများ၊ သဲသောင်ခုံများ၊ ပင်လယ်ဝများ၊ လမုတောများ၊ သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ပင်လယ်ရေအောက် မြက်ခင်းပြင်များ၊ ကမ်းရိုးတန်း လတာပြင်များ၊ ဒီလှိုင်းပြင်များ၊ အယ်လဂျီပြင်များ နှင့် ကျွန်းငယ်ဂေဟစနစ်များ ပါဝင်သည်။  အင်ဒိုနီးရှားသည် သန္တာတြိဂံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အရှေ့အင်ဒိုနီးရှားတွင်ပင် သန္တာကျောက်တန်းနေ ငါးမျိုးစိတ် ၁,၆၅၀ ကျော် ရှိသည်။
ဗြိတိသျှ သဘာဝပညာရှင် အဲဖရက် ရပ်ဆဲလ် ဝေါလေ့စ် မှ အင်ဒိုနီးရှားရှိ အာရှမျိုးစိတ်များ နှင့် ဩစတြေးလျေးရှန်းမျိုးစိတ်များ ပျံ့နှံ့နေမှုကို ပိုင်းခြားထားသောမျဉ်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဝေါလေ့စ်မျဉ်းဟု ခေါ်သော ထိုမျဉ်းသည် ဆွန်ဒါရှဲ့ ၏ အစွန်းပိုင်းနားတွင် မြောက်မှတောင်သို့ ပြေးနေပြီး ကာလီမန်တန် နှင့် ဆူလာဝေစီကြား၊ ကျဉ်းမြောင်းသော လုံဘောက်ရေလက်ကြားတလျှောက်၊ လုံဘောက်နှင့် ဘာလီကြားတို့ ဖြစ်သည်။ မျဉ်း ၏ အနောက်ဘက်တွင် ဒေသရင်း အပင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များသည် အာရှဆန်ပြီး လုံဘောက်မှ အရှေ့သို့သွားသော အခါတွင် ဩစတြေးလျဆန်သွားသည်မှာ ဝီဘာမျဉ်း၏ ထိပ်သို့တိုင်အောင် ဖြစ်သည်။ ၁၈၆၉ခုနှစ်တွင် သူရေးသားခဲ့သော "မလေးကျွန်းစု" ဆိုသော စာအုပ်တွင် ဝေါလေ့စ်သည် ထိုဒေသတွင်သာ တွေ့ရသော မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ သူ၏ မျဉ်းနှင့် နယူးဂီနီကြားရှိ ကျွန်းများရှိရာ ဒေသကို အခုအခါ "ဝေါလေးရှား" ဟု အမည်ပေးထားကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှား၏ များပြားလှပြီး တိုးပွားလျက် ရှိသော လူဦးရေ နှင့် အလျှင်အမြန် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု မြင့်မားခြင်း နှင့် အရင်းအမြစ် မလုံလောက်သော အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် ထိုပြဿနာများသည် အမြဲဆိုသလို အရေးမကြီးသော အဆင့်တွင်သာ ရှိသည်။ ပြဿနာများတွင် မီးစိုက်ရသောမြေများ ပြုန်းတီးခြင်း၊ တရားမဝင်နည်းဖြင့် သစ်တောအကြီးအကျယ် ပြုန်းတီးစေခြင်း နှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော တောမီးများကြောင့် သိပ်သည်းသော မီးခိုးမြူများ အင်ဒိုနီးရှား အနောက်ပိုင်း၊ မလေးရှား နှင့် စင်ကာပူ တို့အပေါ်တွင် ဖုံးလွှမ်းစေခြင်း၊ အဏ္ဏဝါ အရင်းအမြစ်များကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း တို့အပြင် အလျှင်အမြန် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးခြင်း နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်သည့် လေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် စိတ်ချရသော ရေနှင့် အညစ်အကြေး ဝန်ဆောင်မှုတို့ ဖြစ်ကြသည်။  အင်ဒိုနီးရှားသည် ပျမ်းမျှအောက်တွင် ရှိသော်လည်း အနည်းငယ်မျှ တိုးတက်မှုရှိသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်း ရှိကာ ၂၀၁၆ တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ၌ အဆင့် ၁၀၇ ရှိသည်။ ထိုအဆင့်သည် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင်လည်း ပျမ်းမျှအောက်တွင် ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နောက်တွင် ရှိကာ တရုတ်နိုင်ငံထက်မူ အဆင့်ပိုမြင့်သည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သစ်တောပြုန်းတီးမှု အများစုမှာ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး ထို လုပ်ငန်း အတွက် မြေယာများကို ပြန်လည်နေရာချရန် နှင့် သဘာဝ ဂေဟစနစ်ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ဒေသခံ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအား ကြွယ်ဝစေသော်လည်း ဂေဟစနစ်ကို ပြုန်းတီးစေပြီး လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် အများဆုံး မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်သူ နေရာသို့ ရောက်ရှိစေသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းများကြောင့် ကျွန်းတွင်နေထိုင်သော တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဒေသရင်း မျိုးစိတ်များ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေး သမဂ္ဂမှ နို့တိုက်သတ္တဝါ မျိုးစိတ် ၁၄၀ အား မျိုးသုဉ်းရန် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး မျိုးစိတ် ၁၅ ခုအား မျိုးသုဉ်းရန် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ရသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုမျိုးစိတ် ၁၅ ခုတွင် ဘာလီစတာလင်ဆက်ရက်  ဆူမတြာလူဝံ  နှင့် ဂျာဗားကြံ့  တို့ပါဝင်သည်။
ဂျကာတာမြို့ ပါလီမန်အဆောက်အအုံအတွင်း ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော်၌ သမ္မတ တစ်ဦး တာဝန်စတင် ထမ်းဆောင်နေစဉ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် သမ္မတစနစ်ရှိသော သမ္မတနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ အာဏာသည် ဗဟိုအစိုးရတွင် စုစည်းနေသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဆူဟာတို နုတ်ထွက်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး နှင့် အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အဓိက အပြောင်းအလဲများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး နှင့် တရားစီရင်ရေး အခန်းကဏ္ဍများကို ပြန်လည်ပြုပြင်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မှု ၄ ကြိမ်တိုင်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သမ္မတသည် နိုင်ငံ၏ ဥသျှောင်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည့်အပြင် အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသား တပ်မတော်၏ စစ်သေနာပတိချုပ် နှင့် ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေး၊ ပေါ်လစီရေးဆွဲရေး နှင့် နိုင်ငံခြားရေးတို့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သည်။ သမ္မတသည် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကို ခန့်အပ်ပြီး ဝန်ကြီးများသည် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသည့် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ရန် မလိုပေ။ သမ္မတသည် အများဆုံး ငါးနှစ်သက်တမ်း ၂ ကြိမ်မျှ ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် အဆင့်တွင် အမြင့်ဆုံး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှာ ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံ လွှတ်တော် (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိက တာဝန်များမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အထောက်အပံ့ပြုခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သမ္မတအား စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်း နှင့် လိုအပ်ပါက စွပ်စွဲပြစ်တင်စစ်ဆေးခြင်း နှင့်  နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ပေါ်လစီကြမ်းများအား တရားဝင် ဖြစ်စေခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့ အတိုင်ပင်ခံ လွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော် နှစ်ရပ် ရှိသည်။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုကောင်စီ (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၅၆၀ ရှိပြီး ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုကောင်စီ (Dewan Perwakilan Daerah, DPD) တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၃၂ ဦး ရှိသည်။  ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု ကောင်စီမှ ဥပဒေများကို အတည်ပြုပေးပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ အစပြုသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကြောင့် နိုင်ငံတော်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ၎င်း၏ အဆင့်အတန်းကို မြင့်မားစေခဲ့ပြီး ဒေသခံ ကိုယ်စားပြုကောင်စီမှာ ဒေသဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော လွှတ်တော် အသစ် ဖြစ်သည်။ 
တရားမမှု အများစုအား ပြည်နယ် တရားရုံးများတွင် ကြားနာကြပြီး အယူခံလွှာများကို ဗဟိုတရားရုံးတွင် ကြားနာကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှား ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သည် နိုင်ငံ၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံး တရားရုံး ဖြစ်ပြီး အယူခံလွှာများကို နောက်ဆုံး အဆင့် ကြားနာခြင်း နှင့် အမှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အခြားသော တရားရုံးများမှာ ဒေဝါလီခံခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး၊ အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကြားနာသော ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံး၊ ဥပဒေ၏ တရားဝင်ဖြစ်မှု၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အစိုးရ အဖွဲ့များ၏ ဩဇာအာဏာသက်ရောက်မှု စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်သော အငြင်းပွားမှုများကို ကြားနာသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ တရားရုံး ၊ ရှာရီယာ ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော အမှုများကို ကြားနာသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တရားရုံးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင် တရားရေ ကော်မရှင်သည် တရားသူကြီးများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက် ရှိသည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပါတီစုံ စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ နယူးအော်ဒါ အစိုးရပြုတ်ကျပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မည်သည့်ပါတီကမျှ အစိုးရဖွဲ့ရန် လုံလောက်သော အမတ်နေရာဖြင့် အနိုင်မရသဖြင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရများသာ ဖွဲ့နိုင်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှား ဒီမိုကရက်တစ် ကြိုးပမ်းမှု ပါတီ (PDI-P) သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို၏ ပါတီလည်း ဖြစ်သည်။ မဟာ အင်ဒိုနီးရှား လှုပ်ရှားမှု ပါတီ (Gerindra) သည် အင်ဒိုနီးရှား၏ တတိယမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီ ဖြစ်သည်။ အခြားထင်ရှားသော ပါတီများမှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အဖွဲ့များ၏ ပါတီ (Golkar) ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ နှင့် အမျိုးသား နိုးထရေးပါတီ (PKB) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယခုလက်ရှိ အမျိုးသား အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော်တွင် ပါတီ ၁၀ ခု ပါဝင်ပြီး ပါလီမန်၏ ကျော်လွန်စည်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမဲ၏ ၃.၅% ဖြစ်သည်။  ပထမဆုံး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၅၅ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အမျိုးသား အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော် နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လွှတ်တော် တို့အတွက် အမတ်များကို ရွေးချယ်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် အဆင့်တွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ် အထိ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားများသည် သမ္မတကို မရွေးချယ်ခဲ့ပေ။ ထိုအချိန် နောက်ပိုင်းတွင် သမ္မတကို ၅ နှစ်သက်တမ်း တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်ကြပြီး ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုကောင်စီအတွက် ပါတီကိုယ်စားပြု အမတ်များနှင့် ပါတီကိုယ်စားမပြုသော ဒေသခံကိုယ်စားပြု ကောင်စီ အမတ်များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒေသဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲမှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် မြို့တော်ဝန်များကို တစ်နေ့တည်းတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပြည်နယ် ၃၄ ခုရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် ၅ခုမှာ အထူးအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ထားသည်။ ပြည်နယ်တိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်လွှတ်တော် နှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ ရှိကြသည်။ ပြည်နယ်များကို ရီဂျင်စီများနှင့် မြို့တော်များ အဖြစ် ထပ်မံပိုင်းခြားထားပြီး ရီးဂျင့်များနှင့် မြို့တော်ဝန်များမှ အသီးသီး ဦးဆောင်ကြကာ ကိုယ်ပိုင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အား ခရိုင်များ အဖြစ် ထပ်မံခွဲခြားထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကျေးရွာဒေသများ အဖြစ်ထပ်မံ ပိုင်းခြားထားကြသည်။ ထိုပြည်နယ်များမှာ အချိန်နှင့်အမျှ တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပြောင်းလဲမှုမျာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် အရှေ့ကာလီမန်တန်မှ မြောက်ကာလီမန်တန်ကို ခွဲထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျေးရွာအဆင့်သည် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ကွန်မြူနီတီအုပ်စု အဖြစ် ထပ်မံပိုင်းခြားထားပြီး ၎င်းတို့အား အိမ်နီးချင်းအုပ်စုများ အဖြစ် တဖန်ပြန်၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ ဂျားဗားတွင် ကျေးရွာများအား ကျေးရွာငယ်များ အဖြစ် ထပ်မံ ပိုင်းခြားထားပြီး ၎င်းတို့သည် ကွန်မြူနီတီအုပ်စုနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးများ စတင် အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်တွင် ရီဂျင်စီ များနှင့် မြို့တော်များသည် အဓိက အုပ်ချုပ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျေးရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးသည် နိုင်ငံသားတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများကို အိမ်နီးချင်းအုပ်စုများမှ တဆင့် ရွေးကောက်ထားသော ရွာသူကြီးက ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
ပြည်နယ်များထဲတွင် အာချေး၊ ဂျကာတာ၊ ယော့ယာကာတာ၊ ပါပူအာ နှင့် အနောက်ပါပူအာတို့တွင် ဥပဒေပြုရေးအာဏာ ပိုမိုရရှိကြပြီး အခြားသောပြည်နယ်များထက်စာလျှင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ဗဟိုအစိုးရထံမှ အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိသည်။ အာချေးတွင် လွတ်လပ်သော ဥပဒေစနစ် အတွက် အချို့သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပြီး အချို့သော ဒေသခံပါတီများသည် ဒေသအတွင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲတွင်သာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။  ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့သည် ရှာရီယာဥပဒေ ပုံစံတစ်ခုကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။  ယော့ယာကာတာအား အထူးဒေသ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်မှာ နိုင်ငံတော် တော်လှန်ရေးတွင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းသူများဘက်မှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။c. ပါပူအာ ပြည်နယ်အား ယခင်က အီရီယန်ဂျာယားဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အထူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပါပူအာ နှင့် အနောက်ပါပူအာဟူ၍ နှစ်ပိုင်း ပိုင်းခြားခဲ့သည်။ ဂျကာတာသည် နိုင်ငံ၏ အထူးမြို့တော်ဒေသ ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားသံရုံး၊ ကင်ဘာရာမြို့၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေး ရသည့်အချိန်မှစ၍ "လွတ်လပ်ပြီး တက်ကြွသော" နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း ကိစ္စရပ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အရွယ်အစားနှင့် နေရာပေါ်မူတည်၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း အခြားနိုင်ငံများကြား ပဋိပက္ခများတွင် ပါဝင်ရန် လက်ရှောင်ခဲ့သည်။ ဆူကာနိုလက်ထက်တွင် အရင်းရှင်ဆန့်ကျင်ရေး မုန်းတီးမှုများဖြင့် အနောက်တိုင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံများအား ဆန့်ကျင်ခဲ့ခြင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး တင်းမာခဲ့ခြင်း များ ရှိသော်လည်း နယူးအော်ဒါ အစိုးရ လက်ထက်မှစ၍ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး အရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  အင်ဒိုနီးရှားသည် အာရှအတွင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး အာဆီယံ၏ တည်ထောင်သူများတွင် လည်းကောင်း၊ အရှေ့အာရှထိပ်သီးအဖွဲ့ တည်ထောင်သူများတွင်လည်းကောင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။  ဆူဟာတိုခေတ် အစောပိုင်းတွင် ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး နှိမ်နင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ရပ်တန့်နေသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၉၀ တွင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။  အင်ဒိုနီးရှားသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု နှင့် နီးစပ်သော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘက်မလိုက်နိုင်ငံများလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ နှင့် အစ္စလာမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) တို့ကို တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှုဧရိယာ၊ ကိန်းအဖွဲ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) တို့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ထားပြီး အိုပက်အဖွဲ့တွင်လည်း ရံဖန်ရံခါ ပါဝင်တတ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပ သမဂ္ဂ (အီးယူ)၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ လူသားချင်းစာနာမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ရရှိခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂမှ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း ဖွံဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အဖြစ် ယူရိုဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကျော် သုံးစွဲ၍ ကူညီခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အခြေခံပညာရေး မြှင့်တင်ရန်၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ငွေကြေး စီမံခန့်မှု နှင့် တရားစီရင်ရေးတို့ တွင် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်စေရန်၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုတို့ကို တိုက်ဖျက်ရန် တို့အတွက် ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွများနှင့် ဆက်စပ်နေသာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများအား စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူများကို ဖမ်းဆီး၍ တရားစွဲခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဘာလီကျွန်း ကူလာ အပန်းဖြေစခန်းမြို့၌ အသက်ဆုံးရှုံးလောက်သည်အထိ ပြင်းထန်သော ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင် လူပေါင်း ၂၀၂ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ (နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် ၁၆၄ ဦး ပါဝင်သည်။) ထိုတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ၎င်း၏ နောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ ထုတ်ပြန်သော ခရီးသွား သတိပေးချက်များကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလားအလာတို့အား အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား တပ်မတော်။ ထိပ်ဆုံးမှစ၍ လက်ယာရစ် ။ ။ အင်ဒိုနီးရှား ကြည်းတပ် လေ့ကျင့်ရေး ပြုလုပ်နေစဉ်။ ဆူခွိုင်း ၃၀၊ ပင်ဒက် အာနိုယာ သံချပ်ကား နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ရေတပ်သင်္ဘော ကေအာရ်အိုင် စူလ်တန် အစ်စကန်းဒါး မူဒါ ၃၆၇
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ စစ်တပ်တွင် ကြည်းတပ်၊ ရေတပ် (မရိန်းတပ်လည်း ပါဝင်သည်။) နှင့် လေတပ်တို့ ပါဝင်သည်။  ကြည်းတပ်တွင် အမြဲတမ်းစစ်သား ၄၀၀,၀၀၀ ခန့် ရှိသည်။ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်အတွင်း ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂျီဒီပီ၏ ၀.၉% ရှိပြီး အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေသည့် ကိစ္စမှာ ထိုဘတ်ဂျက်အား ထပ်မံပံ့ပိုးပေးနေသည့် စစ်တပ်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းများ ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်အား အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကာလ အတွင်း စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က ပြည်သူ့စစ်များနှင့် အတူ ပြောက်ကျားစစ် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်း အပါအဝင် နိုင်ငံတွင်း လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ကြည်းတပ်၊ ရေတပ်၊ လေတပ်တို့ပါသော စစ်တပ်သည် နယ်စပ်မျဉ်းတလျှောက် အခြေစိုက်ထားကြပြီး နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရန်သူများနှင့် ပြင်ပမှ ကျူးကျော်လာသူများ အား ချေမှုန်းရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ် ၃ ခု အကြာမျှ ဆူဟာတို အစိုးရတွင် ပါဝင်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၈ ခုနှစ် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အပြီးတွင် လွှတ်တော်အတွင်း စစ်တပ်၏ တရားဝင် ကိုယ်စားပြုမှုကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံရေးတွင် ဩဇာသက်ရောက်မှုမှာ အင်အားကြီးနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ 
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတွင်း ပုန်ကန် မငြိမ်သက်မှုများနှင့် ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ အကြား ရုန်းကန်လျှက် ထိန်းသိမ်းနေရသည်။ အာချေး နှင့် ပါပူအာ အပါဝင် အချို့သော လှုပ်ရှားမှုများသည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး နောက်ဆက်တွဲ အနေနှင့် နှစ်ဘက်စလုံးမှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ နှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ အတွက် စွပ်စွဲခံနေရသည်။ အာချေးပြဿနာကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပါပူအာ ပြဿနာမှာ ဆက်လက် ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သမ္မတ ဆူဆီလို ဘမ်ဘန်း ယူဒိုယိုနို အာဏာရယူပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ပြီးပြည့်စုံမှ မရှိသော်လည်း သိသာထင်ရှားသော ဒေသတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ကျဆင်းလာသည်ဟု သိရှိရသည်။အခြားသော စစ်တပ်၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများမှာ နယ်သာလန် နယူးဂီနီနှင့် တိုက်ခိုက်၍ အင်ဒိုနီးရှားနယ်နိမိတ် အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခြင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံ ထူထောင်ခြင်းအား ဆန့်ကျင်သော အင်ဒိုနီးရှား-မလေးရှား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တွေ့ရှိမှု၊ ပီကေအိုင်အား တိုက်ခိုက်၍ အစုအလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနှင့် အင်ဒိုနီးရှား၏ အကြီးဆုံး စစ်ပွဲဖြစ်သော အရှေ့တီမောနိုင်ငံအား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဗဟိုဌာနဖြစ်သော ဂျကာတာမြို့
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်လည်ပတ်စီးဆင်းနေသော အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား ငွေစက္ကူများ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ နှင့် အစိုးရ နှစ်ရပ်စလုံးမှ အရေးပါသောနေရာမှ ပါဝင်နေသည့် ရောပြွမ်းစီးပွားရေး စနစ် ရှိသည်။  နိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးဆုံးသော စီးပွားရေး ရှိပြီး ဂျီ၂၀၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အမည်ခံ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၀၂၀ ထရီလီယံ ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား ကွာခြားမှုနှုန်းဖြင့်(ပီပီပီ) တွက်ပါက ဂျီဒီပီမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၂၅၇ ထရီလီယံ ရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမည်ခံ ဂျီဒီပီ အနေနှင့် တွက်ချက်ပါက ၁၆ ခုမြောက် အကြီးဆုံး စီးပွားရေး ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဂျီဒီပီ(ပီပီပီ) အနေနှင့် သတ္တမမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဂျီဒီပီ (ပီပီပီ) အား လူတစ်ဦးချင်း အနေနှင့် တွက်ချက်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂,၄၃၂ ဒေါ်လာ ရှိပြီး အမည်ခံ ဂျီဒီပီ အနေနှင့် လူတစ်ဦးချင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃,၈၉၅ ဒေါ်လာ ရှိသည်။  ချေးငွေနှင့် ဂျီဒီပီ အချိုးမှာ ၂၆% ဖြစ်သည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းအရ ဝန်ဆောင်မှုသည် ဂျီဒီပီ၏ အကြီးဆုံး ကဏ္ဍဖြစ်ပြီး ဂျီဒီပီ၏ ၄၃.၃% ရှိကာ ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး ကဏ္ဍမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ၄၂.၉% ရှိ၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမှာ ၁၃.၇% ရှိသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍသည် အခြား ကဏ္ဍများထက် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အလုပ်သမား၏ ၄၄.၈% ကို အလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ကာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွင် ၃၄.၃% ရှိပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် ၂၀.၉% ရှိသည်။ 
ကျယ်ပြောလှသော ဆီအုန်း စိုက်ခင်းကြီး။ လက်ရှိ၌ အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆီအုန်းအများဆုံး ထွက်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် အချိန်နှင့်အမျှ သိသာစွာ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။  သမိုင်းကြောင်းအရ စီးပွားရေးသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသို့ လွန်စွာအလေးပေးခဲ့ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့်တစ်ခု ၁၉၅၀ ခုနှစ်များ နှင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် အစိုးရမှ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို တကိုယ်ရေ ဖူလုံရေး အတွက် လှုံ့ဆော်ခဲ့သော ပေါ်လစီများကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။  ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ၏ နှောင်းပိုင်းတွင် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း နှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတို့ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်များထဲတွင် အရှိန်မြင့်လာခဲ့သည်။ ရေနံဈေးကျဆင်းလာခြင်းကြောင့် အစိုးရမှ ရေနံတင်ပို့ရောင်းချခြင်းမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းသို့ ပြောင်းလဲကာ အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။  ထိုသို့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ အတွင်းမှ နောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသို့တိုင်အောင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရေနံဈေးလှုပ်ရှားခြင်း ဖြစ်စေကာမူ ထိုအချိန်၌ပင် ဂျီဒီပီသည် ပျမ်းမျှ ၇.၁% မျှ တိုးတက်နေခဲ့သည်။ အစဉ်တစိုက် တိုးတက်နေခြင်းကြောင့် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းမှာ ၆၀% မှ ၁၅% အထိ ကျဆင်းသွားသည်ကို မြင်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ၏ အလယ်ပိုင်းမှစ၍ ကုန်သွယ်ရေး အတားအဆီးများ လျော့ကျလာသည်နှင့် အမျှ စီးပွားရေးသည် ကမ္ဘာနှင့် ပိုမို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ အာရှငွေကြေးဂယက်သည် အင်ဒိုနီးရှားအား စီးပွားရေးအရ တွင်သာမက နိုင်ငံရေး အရပါ သက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ အစောပိုင်းတုံ့ပြန်မှုမှာ အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား ငွေကြေးအား ဈေးကွက်ပေါ်မူတည်၍ တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အဓိကပြည်တွင်းအတိုးနှုန်းများကို မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် အခွန်ဘဏ္ဍာရေး ပေါ်လစီများကို တင်းကြပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဂယက်၏ ရိုက်ခတ်မှုမှာ အလွန်ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလသို့ ရောက်သောအခါ ငွေကြေးတန်ဖိုး အလျင်အမြန် ကျဆင်းမှုကြောင့် ပြည်သူ့ကြွေးမြီမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၆၀ အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်အား အပြင်းအထန် ကျပ်တည်းစေခဲ့သည်။၁၉၉၈ တွင် ဂျီဒီပီမှာ ၁၃.၁% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာ ၇၂% သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၉ တွင် ၂% မျှ အထိ ပြန်လည် နှေးကွေးသွားသည်။) ၁၉၉၉ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးသည် အနိမ့်ဆုံး အဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဂျီဒီပီ တိုးတက်မှုမှာ ၀.၈% မျှသာရှိခဲ့သည်။
လတ်တလော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှာ ပုံမှန်သာဖြစ်သော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းနှင့် အတူရှိနေသည်။  ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ရည်မှန်းချက်အား စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် ဂျီဒီပီ ဒီဖလေတာ နှင့် စားသုံးသူဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်းတို့မှာ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ၁၀.၇၅% နှင့် ၉% နှုန်း အသီးသီးဖြင့် မြင့်တက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုနှုန်းမှာ ၁၉၉၇ ငွေကြေးဂယက် မတိုင်မီ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုက မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သော အဟုန်နှင့် တူညီပြီး ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ နှင့် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များမှ အဟုန်၏အောက်တွင် ရှိသည်။  ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းများ၏ လားရာမှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များ အတွင်း နိမ့်ကျနေခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေး ထောက်ပံ့မှု အပြောင်းအလဲများကြောင့် ခဏတာ လှုပ်ရှားမှုများသာ ရှိသကဲ့သို့ စားသုံးသူ ဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်း တွင်လည်း ခဏတာမျှ မြင့်တက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ နှင့် ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှုများတွင် တိုးတက်မှုများရှိခဲ့၍ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ နှစ်စဉ် ၆% ကျော် အထိ ရှိလာခဲ့သည်။  ထို့အတွက်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားအား ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ကမ္ဘာ့စီးပွားကျဆင်းမှု အား အင်ဒိုနီးရှား အနေနှင့် အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထိုကာလာအတွင်း စီးပွားရေး အလွန်ကောင်းမွန်နေခဲ့၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံအနေနှင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ဆုံးရှုံးခဲ့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်ကို ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။  သို့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာ ၅% သို့ ပြန်လည်နှေးကွေးခဲ့ပြီး အကြောင်းမှာ မသန့်စင်ရသေးသော သတ္တုများကို တင်ပို့ခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်၍ ပြည်တွင်းသတ္တုသန့်စင်လုပ်ငန်းများအား မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားခြင်း နှင့် တန်ဖိုးမြှင့်ထားသော သတ္တုပစ္စည်းများကို တင်ပို့ရန် အားပေးလှုံဆော်ခြင်း တို့အပြင် အတိုးနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ၏ ၁၀.၈% သည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်း၏ အောက်တွင် နေထိုင်ကြပြီး အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၅.၅% ဖြစ်သည်။ 
ဆီအုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံး ဆီအုန်းထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သကဲ့သို့ အများဆုံး စားသုံးသူလည်း ဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ရောင်းလိုအား၏ တစ်ဝက်ခန့်ကို ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး စိုက်ခင်းပေါင်း ဟက်တာ ၆ သန်းမျှ ရှိပြီး ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမှု အစီအစဉ် အရ ၂၀၁၇ တွင် ဟက်တာ ၄.၇သန်းမျှ ထပ်မံစိုက်ပျိုးရန် ခန့်မှန်းထားသည်။  ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် အနာဂတ်ကမ္ဘာအတွက် ထိန်းသိမ်းခြင်း လက်မှတ်ရထားသော ဆီအုန်း (Certified Sustainable Palm Oil သို့ CPSO) တကမ္ဘာလုံး၏ ၃၅% မျှ ထုတ်လုပ်သည်။ မော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ကား ၁.၂ သန်းခန့်မျှ ထုတ်လုပ်သည့် အတွက် အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှု၌ အဆင့် ၁၈ ရှိသည်။  ယခုအခါတွင် အင်ဒိုနီးရှားကုမ္ပဏီများ အနေနှင့် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်း ၈၀% မှ ၉၀% အထိ ပါဝင်သော မော်တော်ကားများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားမှ အသင့်စားနိုင်သော ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် ၁၂ ဘီလီယံမျှ ထုတ်လုပ်ခဲ့သဖြင့် ထိုနှစ်တွင် အထုပ် ၄၀ ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အများဆုံး ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သည်။  ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ခေါက်ဆွဲခြောက် ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သော အင်ဒိုဖုဒ် သည် အင်ဒိုနီးရှားရှိ လူသိအများဆုံး အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုဖြစ်သော အင်ဒိုမီး အတွက် လူသိများသည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖော်ကျွန်းမဂ္ဂဇင်း၏ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအများဆုံး ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ စာရင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားမှ ပါတာမီနာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုသာ စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၂ ခုနှစ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်များကို အချိုးကျ ပြသထားပုံ
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား၌ ကုန်သွယ်ရေး ပိုငွေပြမှုရှိပြီး ပို့ကုန် နှင့် သွင်းကုန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၀ ဘီလီယံ နှင့် ၁၃၂ ဘီလီယံ အသီးသီး ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ် အတွင်းတွင် ပို့ကုန်နှင့် သွင်းကုန်တို့သည် နှစ်စဉ် ၃% မှ ၄.၈% အသီးသီး လျော့ကျလာခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၂၄ ဘီလီယံ နှင့် ၁၇၃ ဘီလီယံမှ ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အဓိက ပို့ကုန်များတွင် ဆီအုန်း နှင့် ကျောက်မီးသွေးတုံးများမှ ဦးဆောင်နေပြီး ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ကား၊ ကားပစ္စည်းများ၊ ရာဘာနှင့် ကြေးနီရိုင်းတို့သည် အဓိကပို့ကုန်များ၏ အများစု ဖြစ်သည်။ သွင်းကုန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် သန့်စင်ထားသော စက်သုံးဆီနှင့် စက်သုံးဆီကြမ်းတို့ဖြစ်ပြီး တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ ကားပစ္စည်းများ နှင့် ဂျုံတို့မှာ သွင်းကုန်အများစု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အဓိက ပို့ကုန်ဈေးကွက်မှာ တရုတ်(၁၂%)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (၁၁%)၊ ဂျပန် (၁၁%)၊ စင်ကာပူ (၈%) နှင့် အိန္ဒိယ(၇.၂%) တို့ဖြစ်ပြီး အဓိကသွင်းကုန် မိတ်ဖက်များမှာ တရုတ် (၂၃%)၊ စင်ကာပူ(၁၁%)၊ ဂျပန် (၉.၈%)၊ ထိုင်း (၆.၅%) နှင့် မလေးရှား (၅.၄%) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်စာရင်းအရ လမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းသည် အဓိကဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း လမ်းအရှည် ၅၂၃,၉၇၄ ကီလိုမီတာ (၃၂၅,၅၈၂ မိုင်) ရှိသည်။ မြို့တော်နှင့် မြို့အများအပြားတွင် ငှားရမ်းနိုင်သော တက္ကစီကဲ့သို့သော ယာဉ်များ ရှိသည်။ ကိုပါဂျာ ကဲ့သို့သော ဘတ်စ်ကား ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ရှိပြီး ပို၍ ခေတ်မီသော ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ဆုံးဖြစ်သည့် ထရန်စ်ဂျကာတာ ဆို့သည့် ဘတ်စ်ရက်ပစ်ထရန်စစ် (BRT) စနစ် ရှိကာ လမ်းကြောင်း ၁၃ ခုနှင့် လမ်းကြောင်းဆက် ၁၀ ခုတို့တွင် အရှည် ၂၃၀.၉ ကီလိုမီတာ (၁၄၃.၅ မိုင်) မျှ ရှည်လျား၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ နေ့စဉ် ခရီးသည် ၄၃၀,၀၀၀ ဦးကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်။အခြားမြို့များဖြစ်သော ယော့ယာကာတာမြို့၊ ပလမ်ဘန်းမြို့၊ ဒန်ပါဆာမြို့ ၊ ပီကန်ဘာရူးမြို့၊ ဆယ်မာရန်းမြို့၊ မာကက်ဆာမြို့ နှင့် ပါဒန်းမြို့တို့တွင်လည်း ဘီအာရ်တီ စနစ်များ ရှိသည်။ အခြားသော အမြဲမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ ဘာဂျာ့ နှင့် ဘီဆပ်ဟု ခေါ်သော သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များနှင့် အန်းကော့ ဟု ခေါ်သော ဝေမျှ စီးနင်းကြသည့် အငှားယာဉ်များ ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ အဓိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ထိပ်ဆုံးမှစ၍ လက်ယာရစ် ။ ။ ထရန်ဂျကာတာ ဘတ်စ်ကား၊ ဂျာဘိုဒီတာဘက် ရထားလိုင်း၊ ဂါရုဒါ အင်ဒိုနီးရှား၏ ဘိုးအင်း ၇၃၇-၈၀၀ လေယာဉ်ပျံ၊ ပယ်လ်နီ သင်္ဘော
နိုင်ငံ၏ အဓိက ရထားလမ်းများမှာ ဂျားဗားကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် နှစ်မျိုးစလုံးကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်။ မြို့အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ထားသော ရထားလမ်းများကို ထပ်ဆောင်း အားဖြည့်ပေးထားသည်မှာ ဂျကာတာ မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသ၊ ဆူရာဘာရား နှင့် ဘန်ဒေါင်းတို့ရှိ မြို့ပတ်ရထားများ ဖြစ်သည်။ ဂျကာတာနှင့် ပလမ်ဘမ်းတို့တွင် အကြီးစားအမြန် မြို့ပတ်ရထား နှင့် အပေါ့စား အမြန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းများကို တည်ဆောက်လျက် ရှိပြီး  ၂၀၁၅ တွင် အင်ဒိုနီးရှား ၏ ပထမဆုံးနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင်လည်း ပထမဆုံး ဖြစ်သော မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကို တည်ဆောက်ရန် ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုရထားသည် ဂျကာတာမြို့နှင့် ဘန်ဒေါင်းမြို့တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် အတွင် ဖြစ်ပြီး အရှည်အားဖြင့် ၈၇မိုင် (၁၄၀ ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ အစီအစဉ်တွင် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သော ဆူရာဘာရားမြို့သို့ တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ 
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှာ စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုအတွက် အရေးပါပြီး နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ အဖြစ် ဆက်သွယ်ပေးထားကာ အဓိက ကျွန်းကြီးများတွင် အနည်းဆုံး ဆိပ်ကမ်းမြို့ တစ်မြို့စီ ရှိသည်။ အနီးအနားကျွန်းများသို့ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ကျော် ပြေးဆွဲသော လွန်းပျံယာဉ်များ ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဆူမတြာကျွန်းမှ ဂျားဗားကျွန်းကို ဖြတ်၍ လက်ဆားဆွန်ဒါကျွန်းများ အထိ ရှိသော ကျွန်းအတွဲလိုက်များတို့တွင် ဖြစ်ကာ ပိုမို၍ ဝေးကွာသော ကျွန်းများသို့ ဆက်သွယ်ပေးသော ရှည်လျားသည့် ခရီးလမ်းကြောင်းများတွင် သွားလာသည့် ခရီးသည်တင် သင်္ဘောများလည်း ရှိသည်။ အချို့အလုပ်များသော ကမ်းများတွင် ကားသယ်ပို့သော လွန်းပျံယာဉ်များမှာ တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီပတ်လုံး ပြေးဆွဲပေးလျက် ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့ ဆက်သွယ်ပေးသော လွန်းပျံယာဉ်များလည်း ရှိပြီး မလက်ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ်၍ ဆူမတြာကျွန်းနှင့် မလေးရှားကိုလည်းကောင်း၊ စင်ကာပူနှင့် အနီးအနားရှိ အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းများဖြစ်သော ရီအောကျွန်းများသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ လေဆိပ် ၂၃၇ ခုရှိပြီး  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ၁၇ ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ဂျကာတာရှိ ဆိုကာနို-ဟတ်တာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၇ ခုမြောက် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ခရီးသည်ပေါင်း ၆၃ သန်းကို လက်ခံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကာ ဘာလီရှိ ငူရာရိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်နှင့် ဆူရာဘာရားရှိ ဂျွန်ဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တို့သည် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ နှင့် တတိယမြောက် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံပိုင် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သော ဂါရုဒါ အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှေ့ဆောင်လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ဖြစ်သော စကိုင်းတင်းမ်၏ ၂၀ ဦးမြောက် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် လေကြောင်းလိုင်း ခေတ်မီအောင် ပြုလုပ်ရေး အစီအစဉ် အရ ဂါရုဒါ အင်ဒိုနီးရှား လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ဆုများစွာ ရခဲ့ပြီး စကိုင်းထရက်စ်၏ ကြယ်ငါးပွင့်လေကြောင်းလိုင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် နှင့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေယာဉ်တွင်း အမှုထမ်း ဆုတို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အေဂျင်စီ ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒဿမမြောက်အများဆုံး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ၇၆ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံး ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂.၅% ဖြစ်ကာ ၃၆ ဘီလီယံ ကုဗမီတာအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် ပဉ္စမမြောက် အများဆုံး ကျောက်မီးသွေး ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်ပြီး သက်ရင့်ကျောက်မီးသွေး တန်ချိန် ၂၆၃ သန်း နှင့် ကျောက်မီးသွေးနု တန်ချိန် ၃၈ သန်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။  ထုတ်လုပ်မှု၏ ရာခိုင်နှုန်း အများစု ဖြစ်သော သက်ရင့်ကျောက်မီးသွေး တန်ချိန် ၂၃၀ သန်းအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ရေနံမှစ၍ စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် အမြောက်အမြားရှိပြီး ရေနံ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စည်ပေါင်း ၂၂ ဘီလီယံမျှ အရန်သင့်ရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် ၄ ဘီလီယံမှာ ထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်သည့် ပမာဏဖြစ်သည်။ ထိုပမာဏသည် ၁၀ နှစ်တာမျှ ရေနံထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ပမာဏနှင့် နှစ် ၅၀ စာမျှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ပမာဏနှင့် ညီမျှသည်။ ထို့ပြင် ရေနံနှင့် အလားတူသော ကျောက်မီးသွေးအခြေခံ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ စည်ပေါင်း ၈ ဘီလီယံမျှ ရှိသည်။ ထုတ်ယူတူးဖော်နိုင်သော ကျောက်မီးသွေး ပမာဏမှာ တန်ချိန် ၂၈ ဘီလီယံရှိပြီး ဇီဝအပူဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှာ ၂၈ ဂစ်ဂါဝပ်မျှ ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးသော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တို့လည်း ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် နေရာင်ခြည်စွမ်းအင်၊ လေအားသုံးစွမ်းအင်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ ထုတ်သော စွမ်းအင်နှင့် ဇီဝလောင်စာ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အများအပြား ရှိသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၏ ပြည်တွင်း လောင်စာဆီ သုံးစွဲမှုမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည်ပေါင်း ၁.၂ သန်း မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည် ၁.၆ သန်းသို့ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲနိုင်အားမှာ ၅၅,၅၂၈.၅၁ မဂ္ဂါဝပ်မျှ ရှိသည်။ 
နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဆည်ဖြစ်သော ဂျာတေးလူဟာဆည်သည် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းစနစ်ဖြင့် ရေပေးဝေခြင်း နှင့် ရေနေအပင်သတ္တဝါများ ပေါက်ဖွားရှင်သန်စေခြင်း အပါအဝင် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်စေသည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှာ ၁၈၆.၅ မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး ထိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပြည်နယ်လျှပ်စစ် ကုမ္ပဏီမှ စီမံခန့်ခွဲသော ဂျာဗားဓာတ်အားလိုင်းထဲသို့ ပို့လွှတ်သည်။ ဂျာတေးလူဟာ၏ ရေသိုလှောင်ကန်သည် ၂၄၀,၀၀၀ဟက်တာ (၅၉၃,၀၅၃ ဧက) မျှသော စပါးခင်းများသို့ ရေပေးဝေလျက် ရှိသည်။ မြေကြီးဖြင့် တမံတုတ်ထားသော ဆည်သည် ၁၀၅မီတာ (၃၄၄ပေ) မျှ မြင့်မားပြီး ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ (၂,၄၃၂,၁၃၀ ဧကပေ) ရှိသော ရေကို သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ 
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့သော ပါလာပါဂြိုဟ်တု
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာအတွက် အသုံးစရိတ်မှာ အလွန်နည်းပါးပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဂျီဒီပီ၏ ၀.၁% မျှသာ ရှိသည်။  ထို့အတွက်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ထိုနယ်ပယ်များတွင် ဦးဆောင်သော နိုင်ငံတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများတွင် အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ထင်ရှားသော သာဓက များစွာရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အဏ္ဏဝါဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုတွင် ရှင်သန်ကြီးပြင်းကြသော အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတို့သည် အချို့သော ရိုးရာနည်းပညာများ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အဏ္ဏဝါ ဆိုင်ရာ တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် စပါးစိုက်ပျိုးသော နည်းပညာများတွင် ထင်ရှား ကျော်ကြားသည်။ အဏ္ဏဝါဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင်မူ ဘူဂစ်နှင့် မာကတ်ဆာ လူမျိုးများမှာ ထင်ရှားကြပြီး သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပီနီစီလှေဟု ခေါ်သည့် ရွက်လှေများကို တည်ဆောက်ရာတွင် လူသိများသည်။  ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှား အင်ဂျင်နီယာ ဂျိုကော်ဒါ ရာကာ ဆူကာဝါတီ မှ လက်ရှိအဓိကလမ်းမကြီးများ၏ အပေါ်တွင် ရှည်လျားသည့် ကုန်းကျော်တံတားများ ဆောက်လုပ်၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေမည့် ဆောရိုဘာဟူး ဟု ခေါ်သည့် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း နည်းပညာကို တည်ထွင်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် ထိုနည်းစနစ်ကို နိုင်ငံအချို့တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသည်။  ထို့ပြင် နိုင်ငံပိုင် ရထားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်သော အင်ဒိုနီးရှား ရထားလုပ်ငန်း (INKA) သည် ခရီးသည်တင် ရထား နှင့် ကုန်တင်ရထားများကို အမြဲတမ်း ထုတ်လုပ်နေသာ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသို့လည်း တင်ပို့ရောင်းချလျက် ရှိသည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် စစ်ဖက်သုံးနှင့် လူစီး လေယာဉ်များကို ဟိုးယခင်ကတည်းကပင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ တွင် ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် လေယာဉ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော အင်ဒိုနီးရှန်း အေရိုစပေ့စ် သည် စပိန်နိုင်ငံမှ အက်ဒ် ကာဆာ ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဘိုးအင်း နှင့် အဲယားဘတ်စ် တို့ အတွက် လေယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပြီး စီအင်န်-၂၃၅ လေယာဉ်ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံအချို့သို့ တင်ပို့ ရောင်းချသည်။  ထို အောင်မြင်မှုအတွက် ယခင် အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ဘီ ဂျေ ဟာဘီဘီသည် အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသည် တောင်ကိုရီးယား နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပဉ္စမမြောက် မျိုးဆက် ဂျက်အင်ဂျင်တပ် တိုက်လေယာဉ် ကိုင် ကေအက်ဖ်-အိတ်စ်(KAI KF-X) အား ထုတ်လုပ်သည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင် အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး အစီအစဉ် နှင့် အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး အေဂျင်စီ (အမျိုးသား လေကြောင်းနှင့်အာကာသ အင်စတီကျု) (LAPAN) ရှိသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် ပါလာပါ ဟု အမည်ရသည့် ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တုကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တိုကို လွှတ်တင် အသုံးပြုနိုင်သော ပထမဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုဂြိုဟ်တုသည် အင်ဒိုဆက်-အော်ရီဒူးမှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တု အစုအဝေးမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး ဂြိုဟ်တုဖြစ်သော ပါလာပါ အေဝမ်း အား ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိ ကနေဒီ အာကာသစခန်းမှ လွှတ်တင်ခဲ့သည်။  ၂၀၁၇ ခုနှစ် အထိ အင်ဒိုနီးရှားသည် အမျိုးမျိုး အသုံးပြုရန် အတွက် ဂြိုဟ်တု ၁၆ လုံးကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပြီး  အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး အေဂျင်စီမှ ၂၀၄၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတွင်းမှ ကိုယ်ပိုင်လွှတ်တင်နိုင်သည့် ယာဉ်များဖြင့် ဂြိုဟ်တုများကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း အတွင်းသို့ ပို့လွှတ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ 
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီပုထိုးဖြစ်သော ဗောရောဗုဓောဘုရား သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လည်ပတ်မှု အများဆုံး နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဂျီဒီပီတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၈.၂ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ မျှ ပါဝင်ခဲ့သည်။  ထိုနှစ်တွင်ပင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ဧည့်သည်ပေါင်း ၁၄.၀၄ သန်းမျှ လာရောက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ခရီးသည် ၁၆.၀၉ ရာခိုင်နှုန်း မျှတိုးတက်ခဲ့ကာ ခရီးသည်များမှ ၎င်းတို့ လာရောက်လည်ပတ်စဉ် အတွင်း ပျမ်းမျှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂,၀၀၉ ဒေါ်လာမျှ သုံးစွဲခဲ့သည်။  အင်ဒိုနီးရှားသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော ခရီးသည်များမှာ တရုတ်၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဩစတြေးလျ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန် အတွက် ညွှန်ကြားထားသော နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ဖော်ထုတ်ရေး ကမ်ပိန်း၏ ကြွေးကြော်သံမှာ "အံ့ဩဖွယ်ရာ အင်ဒိုနီးရှား" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ 
သဘာဝနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လည်ပတ်စရာနေရာများမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ သဘာဝ ဆိုင်ရာ နေရာများသည် အပူပိုင်း ရာသီဥတု၊ ကျယ်ပြန့်လှသော ကျွန်းစုများနှင့် ရှည်လျားလှသော ပင်လယ်ကမ်းခြေများ ထူးခြားစွာ ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား အင်ဒိုနီးရှား၏ တက်ကြွလှုပ်ရှားသော သမိုင်းကြောင်းနှင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသာ လူမျိုးစုတို့ကို ထင်ဟပ်နေသော ကြွယ်ဝလှသည့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များ မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော သဘာဝ ဂေဟစနစ် ရှိပြီး မိုးသစ်တောများသည် အင်ဒိုနီးရှား ကုန်းမြေ၏ ၅၇% (ဧက ၂၂၅ သန်း) ကို ဖြန့်ကျက်တည်ရှိသည်။ ဆူမတြာ နှင့် ကာလီမန်တန် ကျွန်းပေါ်ရှိ သစ်တောများသည် ရေပန်းစားသော ခရီးသွားဒေသများ ဖြစ်ပြီး မျောက်ဝံတောရိုင်းထိန်းသိမ်းရေး ဒေသမှာ ဥပမာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံး ကမ်းရိုးတန်းရှိပြီး ၅၄,၇၁၆ ကီလိုမီတာ (၃၃,၉၉၉ မိုင်) ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ထင်ရှားသည်များမှာ ရှေးဟောင်း ပရမ်ဘနမ် ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း နှင့် ဗောရောဗုဓော စေတီ ၊ တိုရာဂျာနှင့် ဘာလီကျွန်းပေါ်ရှိ ဟိန္ဒူ ပွဲတော်များ ဖြစ်ကြသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ အဆိုအရ ရာဂျာအမ်ပတ်ကျွန်းများတွင် အဏ္ဏဝါဆိုင်ရာ သက်ရှိ အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှု အများဆုံး အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ၈ ခု မျှ ရှိပြီး ဗောရောဗုဓော စေတီဝန်း ၊ ကိုမိုဒို အမျိုးသား ဥယျာဉ် နှင့် အခြား ယာယီစာရင်းဝင် နေရာ ၁၉ ခုတွင် ဂျကာတာမြို့ဟောင်း၊ ဘူနကန် အမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့် ရာဂျာအမ်ပတ်ကျွန်းများတို့ ပါဝင်သည်။  ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အင်ဒိုနီးရှား သမိုင်း၏ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းတစ်ခုကို ဦးတည်ချဉ်းကပ်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် ဒတ်ချ် အရှေ့အိန္ဒိယ၏ ကိုလိုနီ ဗိသုကာလက်ရာ အမွေအနှစ်ကဲ့သို့သော အရာ ဖြစ်သည်။ အခြား လည်ပတ်စရာ နေရာများမှာ ပြတိုက်များ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ခံတပ်များ နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ကိုလိုနီ အဆောက်အဦးများအား လည်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်း နှင့် ကိုလိုနီ အမွေအနှစ် အဆောက်အဦးများတွင် တည်ရှိသော ဟိုတယ်များတွင် ညအိပ်တည်းခိုနိုင်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။ ရေပန်းစားကျော်ကြားသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားနေရာများမှာ ဂျကာတာ မြို့ဟောင်း၊ ယော့ယာကာတာ၊ ဆူရာကာတာ နှင့် မန်ကူနီဂါရန်ရှိ တော်ဝင်ဂျာဗားနန်းတော်များ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ခရီးသွားနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြိုင်ဆိုင်မှု အစီရင်ခံစာတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအား နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၆ နိုင်ငံတွင် အဆင့် ၄၂ သတ်မှတ်ထားပြီး ရမှတ်မှာ ၄.၂ မှတ် ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအရင်ခံစာ၌ အင်ဒိုနီးရှား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ဈေးသက်သာမှုမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၆ နိုင်ငံတွင် အဆင့် ၅ သတ်မှတ်ထားသည်။ ဗီဇာဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတွင် ခိုင်မာမှု ရှိခြင်း အတွက် အဆင့် ၂ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွင် အဆင့် ၁၇ သတ်မှတ်ထားသည်။ သဘာဝဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များတွင် အဆင့် ၁၇ ရရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များတွင် အဆင့် ၂၃ ရရှိသည်။ သို့သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားသည် အခြေခံ အဆောက်အအုံပိုင်းတွင် ရမှတ်နိမ့်ပြီး အဆင့် ၉၆ သာ ရရှိပြီး အချို့သော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ အဆင့်မမီကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ 
လူဦးရေ ပိရမစ် ၂၀၁၆
၂၀၁၀ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်းအရ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လူဦးရေသည် ၂၃၇.၆ သန်း ရှိပြီး လူဦးရေ တိုးပွားမှုနှုန်းမှာ ၁.၉% မျှ ရှိသဖြင့် မြင့်မားသည်။  ၅၈% သော လူဦးရေသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး ဖြစ်သော  ဂျားဗားကျွန်းပေါ်တွင် နေထိုင်သည်။  လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုမှာ ၁ စတုရန်းမိုင်လျှင် ၃၅၇ ဦး (၁ စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၃၈ ဦး) မျှ ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၈၈ ရှိသည်။ ဂျားဗားကျွန်းတွင်မူ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုမှာ ၁ စတုရန်းမိုင်လျှင် ၂,၄၃၅ဦး (၁ စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁,၀၆၇ဦး) မျှ ရှိသည်။ လူဦးရေသည် ကျွန်းများပေါ်တွင် နေထိုင်မှု ပုံစုံ အမျိုးမျိုး၊ လူနေမှုအဆင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကွဲပြားလျက် ရှိပြီး ဂျကာတာမြို့ ရှိ မြို့ပြနေထိုင်သူများမှ စ၍ ပါပူအာကျွန်းရှိ လူတို့နှင့် အဆက်အဆံမရှိသော လူမျိုးစုများ အထိ အမျိုးမျိုး ရှိသည်။  ၁၉၆၁ ခုနှစ် ကိုလိုနီခေတ်အပြီး ပထမဆုံး လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူခြင်းတွင် စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၉၇ သန်းမျှ ရှိသည်။  နိုင်ငံအတွင်း လူဦးရေ၏ ရာခိုင်နှုန်း အများစုမှာ လူငယ်များဖြစ်ပြီး အသက်အပိုင်းအခြား အလယ်ကိန်းမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ အရ ၂၈.၆ နှစ် ဖြစ်သည်။  လူဦးရေသည် ၂၀၃၀ တွင် ၂၉၅ သန်းခန့်သို့လည်းကောင်း ၂၀၅၀ တွင် ၃၂၁ သန်းခန့်သို့လည်းကောင်း တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။  ၈ သန်းခန့်မျှသော အင်ဒိုနီးရှား လူမျိုးများသည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြပြီး ၎င်းတို့အထဲမှ အများစုမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင် ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ တို့တွင် အခြေချ နေထိုင်လျက် ရှိကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အဓိကလူမျိုးစုများပြ မြေပုံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လူမျိုးစုအားဖြင့် အလွန်များပြားသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထင်ရှားသော လူမျိုးစု ၃၀၀ ခန့် ရှိသည်။  အင်ဒိုနီးရှန်း အများစုသည် အော်စထရိုနီးရှန်း စကားပြောသော လူမျိုးများမှ ဆင်းသက်လာပြီး ၎င်းတို့၏ ဘာသာစကားကို ခြေရာခံလိုက်မယ် ဆိုပါက ပရိုတို-အော်စထရိုနီးရှန်း အဖြစ်တွေ့ရပြီး ယခု ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ နေရာမှ မြစ်ဖျားခံလာသော ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်။ အခြားသော အဓိက လူမျိုးစုများမှာ မာလီနီးရှန်းများ ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။  ဂျားဗားလူမျိုးမျာမှာ အကြီးဆုံး လူမျိုးစု ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ၏ ၄၀.၂% မျှ ရှိသည်။ အခြားသော ဂျားဗားမဟုတ်သည့် လူမျိုးစုကြီးများမှာ ဆူဒါးနိစ်၊ ဘာတတ် နှင့် မာဒူရိစ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ခိုင်မာသော ဒေသစရိုက်လက္ခဏာနှင့် အတူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အဖြစ် ပေါင်းစည်းထားသော စရိုက်လက္ခဏာလည်း ရှိကြသည်။
၁၈၀၀ ခုနှစ် အစောပိုင်း ဆူမတ်တြာအလယ်ပိုင်းတွင် တွေ့ရသော လက်ရေးမူဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ရှိသော ဘာသာစကားပေါင်းများစွာထဲမှ ဘာတတ် တိုဘာ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်း ဘာသာစကားနှင့် ဒေသသုံးစကား အမျိုးပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ကို ပြောဆိုလျက် ရှိကြသည်။အချို့မှာ အော်စရိုနီးရှန်း ဘာသာစကားမိသားစုဝင် ဘာသာစကားများ ဖြစ်သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း မာလူကူးကျွန်းများ နှင့် အနောက်နယူးဂီနီတို့တွင် ပါပူအန် ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း ၂၇၀ ကျော်ကို ပြောဆိုလျက် ရှိကြသည်။  ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားဖြစ်ပြီး မလေးစကားမျိုးကွဲတစ်ခု ဖြစ်ကာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော ဒေသသုံးစကားဖြစ်၍ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာပင် ကျွန်းစုများအတွင်း အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်များတွင် မျိုးချစ်များမှ အသုံးပြုအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဘဟာဆား အင်ဒိုနီးရှား အမည်ဖြင့် ရုံးသုံးဘာသာစကား အဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။ထိုဘာသာစကားတွင် ဂျာဗားနိစ်၊ ဆွန်ဒန်းနိစ်၊ မီနန်ကာဘောင်း၊ ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတ၊ တရုတ်၊ အာရပ်၊ ဒတ်ချ်၊ ပေါ်တူဂီ နှင့် အင်္ဂလိပ် အစရှိသော ဒေသတွင်း နှင့် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများမှ လွှမ်းမိုးမှုများ အမြောက်အမြားပါဝင်သည်။  ပညာရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေး နှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ မီဒီယာများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတိုင်းလိုလိုပင် ထိုစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ် ဖြစ်စေ ပြောဆိုကြသည်။ ပထမဘာသာစကားမှာ ဒေသသုံး ဘာသာစကားများဖြစ်ပြီး ဂျာဗားနိစ် ဘာသာစကားမှာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်သည်။ 
၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ဒတ်ချ်လူမျိုးနှင့် အခြားဥရောပသားများ၊ ယူရေးရှန်းများနှင့် ကပြားဖြစ်သော အင်ဒိုလူမျိုးများသည် ၂၄၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် လူဦးရေ၏ ၀.၄% မျှသာ ရှိသည်။  သမိုင်းကြောင်းအရ သူတို့သည် ဒေသခံလူမျိုးတို့၏ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်လည်း အနည်းငယ်သာ ရှိကြသည်။ ဒတ်ချ်တို့နေထိုင်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဒတ်ချ်ဘာသာစကားမှာ ရုံးသုံးအဆင့် သတ်မှတ်ချက် မရှိပေ။ ဒတ်ချ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်သော လူနည်းစုမှာ ယခင်မျိုးဆက်က ပညာတတ်လူတန်းစားများသော်လည်းကောင်း၊ အချို့သော ဥပဒေများမှာ ဒတ်ချ်ဘာသာစကားဖြင့်သာ ရှိ၍ ဥပဒေဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများသော်လည်းကောင်းဖြစ်ကြသည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး မြို့တော် နှင့် မြို့ကြီးများ
Statistics Indonesia (၂၀၁၄)
ဆူရာဘာယားမြို့ ၁ ဂျကာတာမြို့ ဂျကာတာ 10,075,310 ၁၁ မာကတ်ဆာမြို့ တောင်ဆူလာဝေစီ 1,429,242
၂ ဆူရာဘာယားမြို့ အရှေ့ဂျားဗား 2,853,661 ၁၂ ဘိုဂေါမြို့ အနောက်ဂျားဗား 1,030,720
၃ ဘီကာစီမြို့ အနောက်ဂျားဗား 2,663,011 ၁၃ ဘာတမ်မြို့ ရီအောကျွန်းများ 1,030,528
၄ ဘန်ဒေါင်းမြို့ အနောက်ဂျားဗား 2,470,802 ၁၄ ပီကန်းဘာရူးမြို့ ရီအော 1,005,014
၅ မယ်ဒန်မြို့ မြောက်ဆူမတြာ 2,191,140 ၁၅ ဘန်ဒါလန်ပွန်းမြို့ လန်ပွန်း 960,695
၆ ဒီပေါ့မြို့ အနောက်ဂျားဗား 2,033,508 ၁၆ ပဒန်းမြို့ အနောက်ဆူမတ်တြာ 880,646
၇ တန်းဂရန်းမြို့ ဘန်တန်း 1,999,894 ၁၇ ဒန်ပါဆာမြို့ ဘာလီ 863,600
၈ ဆီမာရန်းမြို့ အလယ်ဂျားဗား 1,584,881 ၁၈ မာလန်းမြို့ အရှေ့ဂျားဗား 845,973
၉ ဖလန်းပင်မြို့ တောင်ဆူမတြာ 1,558,494 ၁၉ ဆာမာရင်ဒါမြို့ အရှေ့ကာလီမန်တန် 797,006
၁၀ တောင်တန်းဂရန်းမြို့ ဘန်တန်း 1,492,999 ၂၀ ဘန်ဂျာမာဆင်းမြို့ တောင်ကာလီမန်တန် 666,223
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု (၂၀၁၀)
နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတွင်း ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှုကို ထည့်သွင်းရေးသားထားသော်လည်း  အစိုးရမှ အစ္စလာမ်၊ ပရိုတက်စတင့်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ကွန်ဖြူးရှပ်ဘာသာ ဘာသာကြီး ၆ ခုကိုသာ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ရိုးရာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အဓိကဖြစ်သော လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဘာသာဝင် ၂၂၇ သန်းရှိကာ အများစုမှာ ဆွန်နီမွတ်စလင် (၉၉%) မျှ ဖြစ်သည်။ ရှိယာ့ မွတ်စလင် နှင့် အမာဒစ် မွတ်စလင် ၀.၅ % နှင့် ၀.၂% အသီးသီး ရှိကြသည်။  ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မှာ လူဦးရေ၏ ၁၀% (ပရိုတက်စတင့် ၇% နှင့် ရိုမန်ကက်သလစ် ၂.၉%) ခန့်မျှ ရှိပြီး ၁.၆ % မှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဖြစ်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အခြားဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၀.၈% မျှ ရှိသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုမှာ ဘာလီကျွန်းသားများ ဖြစ်ကြပြီး  ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ 
ဘိုဂေါမြို့ ပူရာ ပါရာယန်ဂန် အာဂွန်း ဂျာဂတ်ကာတာရှိ သီရိ ဘာဒူဂါ မဟာရာဂျာသို့ ရည်စူးဆောက်လုပ်ထားသော ဟိန္ဒူနတ်ကွန်း။ ဟိန္ဒူဘာသာသည် အင်ဒိုနီးရှား အနုပညာ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုတွင် သက်ရောက်မှုနှင့် အမှတ်ထင်ကျန်ရစ်မှု ထင်ရှားစွာ ရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အေဘရာဟမ် ဘာသာ မရောက်လာမီ အချိန်က အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းစုများတွင် နေထိုင်သူများသည် အော်စရိုနီးရှန်း လူမျိုးများ ကြားတွင် ထင်ရှားသော အန်နီမစ်ဆင် နှင့် ဒိုင်နမစ်ဆင်တို့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘိုးဘေးတို့၏ ဝိဉာဉ်များကို အလေးအမြတ်ထား ကိုးကွယ်ကြပြီး သဘာဝလွန် နတ်ဖြစ်သော ဟရန်ဆိုသော နတ်များသည် သစ်ပင်ကြီးများ၊ ကျောက်တုံးများ၊ သစ်တောများ၊ တောင်ကုန်းများ နှင့် မြင့်မြတ်သော နေရာများတွင် နေထိုင်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှား ရိုးရာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများတွင် ဆူဒါးနိစ်လူမျိုးတို့၏ ဆွန်ဒါဝီဝီတန် ကိုးကွယ်မှု၊ ဒါယတ်လူမျိုးတို့၏ ကာဟာရင်ဂန်ကိုးကွယ်မှု၊ တိုရာဂျာလူမျိုးတို့၏ အာလွတ်တိုဒိုလို ကိုးကွယ်မှု၊ မာနူဆီလာ နှင့် နျူအာလူး လူမျိုးတို့၏ နောရပ်စ် ကိုးကွယ်မှု၊ ဘာတတ်လူမျိုးတို့၏ ပါမာလင်မ် ယုံကြည်မှု၊ ဂျားဗားလူမျိုးတို့၏ ကီဂျာဝမ် ကိုးကွယ်မှုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သော ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း နှင့် ယုံကြည်မှုတို့သည် အခြားသော ဘာသာကိုးကွယ်မှုများ လက်ခံကျင့်သုံးကြသည့် အပေါ်တွင် သက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုရှိပြီး သာဓကပြစရာ လူ အများအပြားပင် ရှိသည်။ ဂျားဗားကျွန်းသားတို့၏ အဘန်ဂန်ဘာသာ၊ ဘာလီကျွန်းသားတို့၏ ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဒါယတ်လူမျိုးတို့၏ ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့တွင် နဂိုရ်ရှိရင်းစွဲ ဘာသာ အတိုင်း မဟုတ်ပဲ ရိုးရာယုံကြည်မှုများနှင့် ပေါင်းစပ် ကျင့်သုံး ကိုးကွယ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ 
ဟိန္ဒူဘာသာ၏ လွှမ်းမိုးမှုသည် အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းစုများသို့ အေဒီ ၁ ရာစုခန့်ကပင် အစောဆုံး ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။  အေဒီ ၁၃၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဆူဒါးနိစ်လူမျိုးတို့၏ ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သော ဆလာကာနာဂါရ နိုင်ငံသည် အနောက်ဂျားဗားတွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး ကျွန်းစုများအတွင်း ပထမဆုံး အိန္ဒိယဆန်သော နိုင်ငံတော် အဖြစ် သမိုင်းတင်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ကာ အိန္ဒိယာ ကုန်သည် တစ်ဦးမှ ဒေသခံ ဆူဒါးနိစ် မင်းသမီးတစ်ပါးနှင့် လက်ဆက်၍ ထူထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အေဒီ ၆ ရာစုခန့်တွင် ရောက်ရှိလာသော  အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းကြောင်းသည် ဟိန္ဒူဘာသာ သမိုင်းကြောင်းနှင့် နီးစပ်စွာ ဆက်နွယ်လျက် ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသော ဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်များ ထိုအချိန်ခန့်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကျွန်းစုများ အတွင်း အင်အားကြီး၍ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော မာဂျာပါဟစ်၊ ဆေးလန်ဒရာ၊ သီရိဝိဇယ နှင့် မာတာယမ် အစရှိသော ဟိန္ဒူ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်များ တိုးတက်ခြင်း ပျက်သုဉ်းခြင်းတို့ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ လူများစုက မကိုးကွယ်ကြတော့သော်လည်း ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် အင်ဒိုနီးရှား၏ ယဉ်ကျေးမှုတွင် လွှမ်းမိုးမှု ဆက်လက် ရှိနေသေးသည် ကို တွေ့ရသည်။
ထိုကျွန်းစုများသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်မှာ ရှဖီး ဥပဒေသိပ္ပံပညာကျောင်းမှ အတွေးအခေါ်ကို စွဲကိုင်သော ဆွန်နီအစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ကုန်သည်များ ပါဝင်သကဲ့သို့ အိန္ဒိယတိုက်ငယ် နှင့် အာရေဗျကျွန်းဆွယ် တောင်ပိုင်းမှ ဆူဖီအစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ကုန်သည်များလည်း ပါဝင်သည်။  ဝါလီဆန်ဂါ အစ္စလာမ် သူတော်စင်များ၊ တရုတ်လူမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေသူ ကျန်းဟီ နှင့် အချို့သော စူလတန်တို့၏ စစ်ပွဲများ အစရှိသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ပျံ့နှံ့မှုမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်လာခဲ့သည်။  နေရာအတော်များများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် အစ္စလာမ် မဟုတ်သော ဘာသာများ အပေါ်တွင် ဖုံးလွှမ်းခြင်း နှင့် ရောစပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် နောက်ဆုံး ရလဒ်အနေနှင့် အများနှင့် မတူပဲ တမူထူးခြားသော အစ္စလာမ် ဘာသာ ပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်လာခဲ့သည်။  အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ပုံ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံစံ မတူပေ။ နိုင်ငံအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မည်ဆိုပါက အဓိက အစုကြီး နှစ်ခု အဖြစ် ခြုံငုံသုံးသပ် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပထမ အစုမှာ ရှေးရိုးဝါဒကို နီးစပ်စွာ လိုက်နာသော်လည်း ယနေ့ခေတ် သင်ယူမှုများကိုပါ လက်ခံသည့် "ခေတ်သစ်ဝါဒ" နှင့် အင်ဒိုနီးရှား၏ အကြီးဆုံး လူထုဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီး နှစ်ခု ဖြစ်သည့် မူဟာမက်ဒီယာ နှင့် နာ့ဒ်လာတူး အူလမာ တို့မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ဒေသခံ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေးကျောင်းများမှ ဆရာများ၏ ပြန်ဆိုမှု အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးသော "ရိုးရာဝါဒ" တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဂျကာတာ ကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်းရှိ လူစုလူဝေး ဝတ်ပြုခြင်း
ကက်သလစ်ဝါဒကို ကျွန်းစုများသို့ စတင်သယ်ယူလာခဲ့သည်မှာ ပေါ်တူဂီကုန်သည်များနှင့် ဂျေရှု ဖရန်စစ် ဇေဗီယာ အစရှိသော သာသနာပြုများဖြစ်ကာ ၎င်းတို့သည် ကျွန်းစုသို့ လာရောက်၍ ထောင်နှင့်ချီသော ဒေသခံများကို နှစ်ခြင်းခံပေးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဒတ်ချ်တို့ အနေနှင့် စပိန်ကက်သလစ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအား နှစ် ၈၀ တိုင်အောင် တော်လှန်ခဲ့သဖြင့် ဒတ်ချ်အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီမှ ထိုဘာသာအား တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခြင်းနှင့် ဒတ်ချ်တို့အနေနှင့် မနှစ်မြို့သော တုံ့ပြန်မှုများရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဘာသာရေးပျံ့နှံ့မှု အတွက် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ယနေ့ခေတ် ဖလောရက်စ် ကျွန်းနေရာတွင် လာရန်တူကာ တော်ဝင်မင်းဆက်မှ ၁၆ ရာစုခန့်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ၏ တစ်ခုတည်းသော ကက်သလစ် နိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးသော ဘုရင်၏ အမည်မှာ လော်ရန်ဇိုဖြစ်သည်။  ပရိုတက်စတင့်ဝါဒမှာမူ ဒတ်ချ်တို့၏ ကိုလိုနီခေတ် အတွင်း ကာလ်ဗီနစ် နှင့် လူသာရီယံတို့၏ သာသာနာပြုလုပ်ငန်းများကြောင့် တည်ရှိခဲ့သည်။. ထိုနှစ်ခုမှာ ထင်ရှားသော ကိုးကွယ်မှုများဖြစ်သော်လည်း အခြားသော ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲအများအပြားကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရသည်။ ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန် လူသာရီယံ သာသနာပြု လူးဝစ် အင်ဝါ နော်မန်ဆန်မှ တည်ထောင်ခဲ့သော ဘာတတ် ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတော်မှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။
အနောက်ဂျားဗားရှိ ဘန်ဒေါင်းနည်းပညာ တက္ကသိုလ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ပညာရေးသည် ၁၂ နှစ် အထိ မသင်မနေရ ဖြစ်သည်။ မိဘများ အနေနှင့် အစိုးရမှ ဖွင့်လှစ်၍ ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင်ရှိသော ဘာသာရေးနှင့် မဆက်နွယ်သည့် ကျောင်းများကို ရွေးချယ်နိုင် သကဲ့သို့ ဘာသာရေး ဦးစီးဌာနမှ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသော ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက တစ်ပိုင်း ဘာသာရေးကျောင်း (အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ် ဘာသာ) များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံတော် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပေါ်တွင် အခြေမခံသော အင်တာနေရှင်နယ် ကျောင်းများလည်း ရှိသည်။ ကျောင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းမှာ မူလတန်းအတွက် ၉၀% (၂၀၁၅) ၊ အထက်တန်းအတွက် ၇၆% နှင့် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်အဆင့်အတွက် ၂၄% ဖြစ်သည်။ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၉၅.၂၂ % ဖြစ်ပြီး အစိုးရမှ ဂျီဒီပီ၏ ၃.၅၉% အား ပညာရေးအတွက် သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ် နိုင်ငံပိုင် တက္ကသိုလ် ၁၁၈ ခု ရှိပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆင်မြင့်ပညာဆိုင်ရာ ကျောင်း ၁,၈၉၀ ခု ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကျူအက်စ် ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စာရင်းအရ နိုင်ငံအတွင်း ထိပ်ဆုံးအဆင့် တက္ကသိုလ်များမှာ အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ် (အဆင့် ၂၉၂)၊ ဘန်ဒေါင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် (အဆင့် ၃၅၉) နှင့် ဂတ်ဂျာ မာဒါ တက္ကသိုလ် (အဆင့် ၃၉၁) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်အားလုံးမှာ ဂျားဗားကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး အန်ဒါလပ် တက္ကသိုလ်တစ်ခုသာ ဂျားဗားပြင်ပရှိ ဦးဆောင်ဦးရွက် တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်သည် ဂျီဒီပီ၏ ၂.၉၈% ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၁.၇% တိုးတက်မည်ဟု ခန့်မှန်းကာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇.၁ ဘီလီယံ အထိ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ နိုင်ငံသားများအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အလုံးစုံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိစေရန် ရည်ရွယ် စတင်ခဲ့သော နိုင်ငံတော် ကျန်းမာရေး အာမခံ အစီအစဉ်ဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ပေးထားသည်။ထိုအစီအစဉ်အရ နိုင်ငံသားများသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု အများအပြားကို ရရှိကြသကဲ့သို့ ထိုအစီအစဉ်သို့ ပါဝင်ပူးပေါင်းသော ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကိုလည်း ရရှိကြသည်။ လတ်တလော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်းများသည် သိသာစွာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း သက်တမ်းမှာ ၆၃ နှစ်ရှိရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၇၁ နှစ် သို့လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ် သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ကလေး ၁,၀၀၀ လျှင် ၈၄ ယောက်မှ ၂၀၁၅ တွင် ကလေး ၁,၀၀၀ လျှင် ၂၇ ယောက်သို့ လည်းကောင်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။  သို့သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် မိခင်နှင့် ကလေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ လေထုအရည်အသွေး နိမ့်ကျမှု၊ အာဟာရ ချိုတဲ့မှု၊ ဆေးလိပ်သောက်နှုန်း မြင့်မားမှု နှင့် ကူးစက်ရောဂါများ အစရှိသော ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကြုံတွေ့နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှား လူဦးရေ၏ ၈၀% သည် ကျွန်းစုများ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံ၏ အခြားအပိုင်းများနှင့် ယှဉ်လျှင် တိုးတက်မှုနှေးကွေးသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် လူဦးရေသိပ်သည်းသော ကျွန်းများနှင့် စီးပွားရေး ဗဟိုဌာနများ (ဆူမတြာ နှင့် ဂျားဗား) သည် လူဦးရေ ကျဲပါးပြီး အခွင့်အလမ်းမရှိသော ဒေသများ (မာလူကူး နှင့် ပါပူးအား) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း နှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် ကွာခြားမှု များစွာ ရှိသည်။  ကိုလိုနီခေတ်မှ အစပြုခဲ့သော လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားတရုတ်လူမျိုးတို့ အပေါ်တွင် ရှိသော လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုသည် ယနေ့တိုင်အောင် ရှိနေသေးသည်။  ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်သော ဆတ်ဆတ်ထိ မခံမှုမှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စရိုက်လက္ခဏာအဖြစ် ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင် ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဂျကာတာ၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တရုတ်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူ ဘာဆူကီ တာဟာဂျာ ပါနာမား အား ဘာသာရေးစော်ကားမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။  လိင်တူချစ်သူကိစ္စများသည်လည်း အင်ဒိုနီးရှားတွင် လတ်တလော အာရုံစိုက်စရာ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာနေသည်။  လိင်တူချစ်သူကိစ္စသည် နိုင်ငံ၏ နေရာအတော်များများတွင် တရားဝင် ဖြစ်သော်လည်း အာချေး နှင့် တောင်ဆူမတ်တြာတွင် တရားမဝင်ပေ။  လိင်တူချစ်သူများနှင့် ၎င်းတို့အတွက် အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများသည် ပြင်းထန်သော ဆန့်ကျင်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ခံကြရပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် အာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်လျက် ရှိသည်။ 
ဖလောရက်စ်ကျွန်း ဝါတူဘလာပီရှိ ကချေသည်များကို ရိုးရာဝတ်စုံများဖြင့် တွေ့ရပုံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။  လူမျိုးစု တစ်ခုတိုင်းစီတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ၊ အနုပညာများ၊ ဟင်းလျာများ၊ ရိုးရာဝတ်စုံများ နှင့် ဘာသာစကားတို့ ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စရိုက်လက္ခဏာတို့သည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ၊ အာရပ်၊ တရုတ်နှင့် ဥရောပတို့မှ မြစ်ဖျားခံသော ယဉ်ကျေးမှုတို့၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံရပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ရိုးရာများမှာ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ အပါအဝင် ဘာသာတရားပေါင်း မြောက်များစွာ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ များစွာ သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ရလဒ်အနေနှင့် ရှုပ်ထွေးပြီး သီးသန့်ဖြစ်သော ယဉ်ကျေးမှု အရောအနှော ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကာ မူလပထမ ဒေသရင်း ယဉ်ကျေးမှုတို့မှ ကွဲပြားခြားနားသွားသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် လက်ရှိတွင် ယူနက်စကို၏ အကောင်အထည် ပြ၍မရသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် စာရင်းတွင် ၉ ခု ပါဝင်လျက် ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ဝါရန်ရုပ်သေးပြဇာတ်၊ ကရစ်ဓား၊ ပါတိတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား ပါတိတ် ဖန်တီးရန်လိုအပ်သော ပညာရေးနှင့် သင်ကြားရေး၊ အန်ကလောင်း တူရိယာ၊ ဆာမန် အက၊ နိုကန်အိတ် နှင့် ဘာလီအက၏ မျိုးကွဲ ၃ မျိုးတို့ ပါဝင်သည်။
ကြက်တိုက်နေပုံကို ဖော်ပြထားသော ရိုးရာဘာလီပန်းချီကား
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အနုပညာတွင် ရာစုနှစ်များစွာအား ဖြတ်သန်းထွန်းကားလာသော သက်တမ်းရင့် အနုပညာနှင့် လတ်တလော ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသော ခေတ်ပြိုင်အနုပညာတို့ ပါဝင်သည်။ ဒေသတွင်း အရင်းခံ အနုပညာများကို မကြာခဏ ဆိုသလို တွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်း အင်ဒိုနီးရှား အနုပညာသည် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်စီးဆင်းလျက် ရှိပြီး အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ၊ အာရပ်ကမ္ဘာ၊ တရုတ် နှင့် ဥရောပတို့မှ လွှမ်းမိုးမှုများပါဝင်သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်သွယ်မှု နှင့် ထိတွေ့မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သလို မကြာခဏဆိုသလိုပင် ကုန်သွယ်မှု၏ တွန်းအားလည်း ပါဝင်သည်။  ပန်းချီအနုပညာသည် ဘာလီတွင် ထွန်းကားပြီး ဘာလီကျွန်းသားများမှာ ၎င်းတို့၏ အနုပညာမြောက်မှု အတွက် ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းတို့၏ ပန်းချီ ယဉ်ကျေးမှုသည် ဂန္ထဝင် ကာမာဆန် နှင့် ဝါယံ စတိုင်လ် သရုပ်ဖော် ပုံပြောခြင်း တို့မှ အစပြုခဲ့ပြီး အရှေ့ဂျားဗားရှိ ကန်ဒီခေါ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘုရားပုထိုးများတွင် တွေ့ရသော သရုပ်ဖော်အနုပညာမှ ဆင့်ပွားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုပန်းချီများသည် အလွန်တက်ကြွလှုပ်ရှားရှိနေသော်လည်း အသေးစိတ် ရှုပ်ထွေးသော အနုပညာဖြစ်ကာ အပူပိုင်းပုံစံရှိသော ဘာရော့ခ်ရိုးရာပန်းချီနှင့် ဆင်တူသည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဧရာမကျောက်တုံးပန်းပုများကို နေရာအချို့၌ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် လူမျိုးစု အနုပညာများမှာ နိုင်အပ်စ်လူမျိုး၊ ဘာတတ်လူမျိုး၊ အက်စမတ်လူမျိုး၊ ဒါယတ်လူမျိုးနှင့် တိုရာဂျာလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုများအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားခဲ့သည်။  ထိုလူမျိုးစုများ အတွင်း ပန်းပုထုရန် အတွက် သစ်သားနှင့် ကျောက်တုံးတို့ကို အမြဲဆိုသလိုပင် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။ ၈ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစု အတွင်းတွင် ဂျာဗား ယဉ်ကျေးမှုလောကသည် အသေးစိတ်သော ကျောက်တုံးပန်းပုထုခြင်း နှင့် ဗိသုကာပညာတို့တွင် တိုးတက်ထွန်းကားလာခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူ-ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒါမစ် ယဉ်ကျေးမှုလောက၏ လွှမ်းမိုးမှုများလည်း ပါဝင်သည်။ ဗောရောဗုဓော ဘုရား နှင့် ပရမ်ဘာနမ် တို့သည် ထိုအနုပညာအတွက် ထင်ရှားသော ဥပမာများ ဖြစ်ကြသည်။
တိုရာဂျန်ရွာ တစ်ခုရှိ တောင်ကိုနန်အိမ်များရှိသော လမ်းတစ်လမ်း
အနုပညာကဲ့သို့ပင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဗိသုကာပညာသည်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်နေ၍ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေပြီး အဆောက်အဦးများ၏ စတိုင်လ်နှင့် နည်းစနစ်တို့ပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အထင်ရှားဆုံး လွှမ်းမိုးမှုမှာ အစဉ်အဆက်အားဖြင့် အိန္ဒိယတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သော်လည်း တရုတ်၊ အာရပ် နှင့် ဥရောပတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာလည်း အရေးပါသည်။ ရိုးရာ လက်သမားပညာ၊ ပန်းရန်ပညာ၊ ကျောက်ဆစ် နှင့် သစ်သား ထွင်းထုခြင်း နည်းစနစ် နှင့် တန်ဆာဆင်မှုများမှာ ရိုးရာနည်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဗိသုကာပညာများ တွင် အများအပြား ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး ရိုးရာအိမ်စတိုင် အများအပြား ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အတွင်းရှိ လူမျိုးစု အမျိုးမျိုး တို့၏ ရိုးရာအိမ်များနှင့် အခြေချ နေထိုင်မှုများမှာ အလွန်အမင်း ကွဲပြားခြားနားပြီး လူမျိုးစုတစ်ခုချင်းစီတွင် သီးသန့် သမိုင်းကြောင်း ရှိခဲ့သည်။ ထိုအိမ်များသည် ကျေးရွာတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစုနေစေသော ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးများ၊ ရိုးရာဥပဒေများ နှင့် ဘာသာတရားများ စုစည်းနေသော ကွန်ယက်၏ ဗဟိုချက်မပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် တိုရာဂျာ တို့၏ တောင်ကိုနန်အိမ်များ၊ မိနန်ကာဘောင်း တို့၏ ရူးမားဂါဒန် စံအိမ်များ နှင့် ရန်ကျန်း စပါးကျီများ၊ ဂျော့ဂလိုစတိုင်လ် အမိုးများ ပါဝင်သော ဂျားဗားစတိုင်လ် ပန်ဒိုပို မဏ္ဍပ်များ၊ ဒါရပ်လူမျိုးတို့၏ အိမ်ရှည်များ၊ အမျိုးမျိုးသော မလေးအိမ် များ၊ ဘာလီအိမ်များ နှင့် ပုထိုးများ အပြင် စတိုင်လ် အမျိုးမျိုးရှိသော စပါးကျီများ ပါဝင်သည်။
အင်ဒိုနီးရှား ဂီတနှင့် အက။ ထိပ်ဆုံးမှစ၍ လက်ယာရစ်။ ဂါမီလန်းတူရိယာ တီးခတ်နေသူ၊ အန်းကလုံး တူရိယာ၊ ဆူဒါးနိစ်တို့၏ ဂျိုင်းပုံဂန် မိုဂျန် ပရီယန်ဂန် အက၊ ဘာလီတို့၏ ပန်ဒတ် အက
အင်ဒိုနီးရှား၏ ဂီတသည် သမိုင်းမှတ်တမ်းများ မရှိခင် အချိန်ကပင် ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသော ရှေးဦးမူလနေ လူမျိုးစုတို့သည် ၎င်းတို့၏ ရိုးရာဓလေ့များတွင် တူရိယာပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်သီဆိုရသော ရွတ်ဖတ်မှု နှင့် တေးသီချင်းများကို ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားရိုးရာ တူရိယာများအား ဥပမာ အနေနှင့် ပြရမည် ဆိုပါက အန်းကလောင်း ခေါ် ဝါးဆစ်ဝိုင်း၊ ကာဆာပီ ဆူလင်း ခေါ် ရိုးရာမိကျောင်း တူရိယာ နှင့် ပုလွေ တွဲဖက် တီးမှုတ်မှု၊ ဆီတာရန် ဂီတ၊ မောင်း၊ ဂါးမီလန်း ခေါ် ကြေးမောင်းဝိုင်း၊ ဒီဂေါင်း၊ ကီဗျာမောင်း၊ ဘန်ဘောင်း၊ တာလန်ပေါင်း၊ ကူလင်တန် နှင့် ဆဆန်ဒိုတို့ ပါဝင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဂီတ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေမှုမှာ အင်ဒိုနီးရှား ပြည်သူတို့၏ ဂီတပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲပါလာသည့် နိုင်ငံခြား လွှမ်းမိုးမှုများ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုချင်း ထိတွေ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ဂမ်းဘတ်စ် နှင့် ကာဆီဒါ ၊ ပေါ်တူဂီမှ ကီရောင်ကောင်း နှင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒီ နှင့် မလေးသံစုံတီးဝိုင်းတို့မှ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်နေသာ ဒန်ဒတ် ဂီတ တို့ ဖြစ်ကြသည်။  ယနေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှား ဂီတလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံအဝှမ်း ရေပန်းစားရုံမျှသာ မကဘဲ ဒေသတွင်း ယဉ်ကျေးမှုတူညီသည့် အပြင် အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာစကား နှင့် မလေးဘာသာစကားတို့မှာ ဆင်တူသဖြင့် မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် ဘရူနိုင်း နိုင်ငံတို့တွင်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။
နိုင်ငံ၏ ရှုပ်ထွေးလှသော သမိုင်းကြောင်းကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် အကပုံစံအမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။ နိုင်ငံအတွင်း မူလပထမ အကအမျိုးအစား ၃,၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ပညာရှင်များက ထိုအကများသည် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများ နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပူဇော်မှုများမှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။ ထိုအကများတွင် စစ်ပွဲအက၊ စုန်းကုဆရာဝန် အက နှင့် မိုးခေါ်အကတို့ အပြင် ဟူဒေါက် ကဲ့သို့သော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဓလေ့ထုံးတမ်း များ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်း အကများကို ခေတ် ၃ ခေတ်မှ လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှာ သမိုင်းမတင်မီခေတ် နှင့် လူမျိုးစုခေတ်၊ ဟိန္ဒူ-ဗုဒ္ဓဘာသာခေတ်၊ အစ္စလာမ်ခေတ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ လတ်တလော အချိန်များတွင် ခေတ်ပေါ်အကများကိုလည်း ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် ကခုန်ကြပြီး ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ များနှင့် ဖျော်ဖြေဧည့်ခံပွဲကဲ့သို့သော ပွဲများတွင် ကခုန်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်များကြားတွင် မြို့ပြလူငယ် အကများဖြစ်သော လမ်းမပေါ်တွင် ကခုန်ခြင်းများ ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရိုးရာအကများဖြစ်သော ဂျားဗားအက၊ ဆူဒါးနိစ်အက၊ မိနန်အက၊ ဘာလီအက နှင့် ဆာမန် အကတို့ကိုလည်း လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသော ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် ဆက်လက်ကခုန်ဆဲဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ၏ ရှည်လျား ရှုပ်ထွေးပြီး ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသည့် သမိုင်းကြောင်းကြောင့် အမျိုးမျိုးသော စတိုင်လ်ရှိသည့် အဝတ်အစားများ ရှိသည်။ ၎င်း၏ အမျိုးသားဝတ်စုံသည် ဒေသရင်းနေ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ရိုးရာ အဝတ်အစားဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုမှ ပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂျားဗားကျွန်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အချက်အချာနေရာ ဖြစ်လာသည့် အချိန်မှစ၍ ဂျားဗား ပါတိတ် နှင့် ကီဘာရာ တို့သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လူသိအများဆုံး အမျိုးသား ဝတ်စုံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုဝတ်စုံမှာ မူလက ဂျားဗားတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည် မဟုတ်ပဲ ဆူဒါးနိစ် နှင့် ဘာလီ တို့နှင့်လည်း ပတ်သက်လျက် ရှိသည်။  ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပါတိတ်အား ယူနက်စကိုမှ လူသားတို့၏ ပါးစပ်နှင့် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြ၍မရသော အမွေအနှစ်တို့၏ အကောင်းမွန်ဆုံးအရာ တစ်ခု အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်းတို့၏ ရိုးရာဝတ်စုံ သီးသန့် ရှိပြီး  မြောက်ဆူမတ်တြာမှ ဘာတတ်တို့၏ အူလော့စ် ဝတ်စုံ၊ ဆူမတ်တြာမှ မလေး နှင့် မင်းနန်ကာဘောင်းတို့၏ ဆောင်းကက်၊ လုံဘောက်ရှိ ဆာဆက်တို့၏ အီကက်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသားဝတ်စုံများကို ရိုးရာ လက်ထပ်ပွဲများနှင့် အမှန်အကန်ကျင်းပသော ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် ဝတ်ဆင်ကြပြီး ထိုပွဲများတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဝတ်စုံများကို ရိုးရာဝတ်စုံမှ ယနေ့ခေတ် ဝတ်စုံအထိ ထင်ရှားရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်သည့် အပြင် အစိုးရ နှင့် တရားဝင်ပွဲများတွင်လည်း သံအမတ်များ၊ သမ္မတ နှင့် သမ္မတကတော်တို့မှ အမျိုးသားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ကြသည်ကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်သည်။
နာဆီ ပါဒန် အား ရန်ဒန်း ၊ ဂူလိုင်း နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် တို့ထည့်ထားပုံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အစားအစာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမျိုးမျိုး အပေါင်းစပ်ဆုံး၊ အလှုပ်ရှားဆုံး နှင့် အရောင်အစုံဆုံး ဟင်းလျာများဖြစ်ကာ အရသာပြင်းပြင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ဒေသခံ အစားအစာများ အများအပြားရှိပြီး အများစုမှာ ဒေသခံ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် တရုတ်၊ဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း နှင့် အိန္ဒိယ အစရှိသော နိုင်ငံခြား လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်ရောစပ်နေသည်။  ထမင်းသည် အဓိက စားစရာဖြစ်ပြီး အသားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပါဝင်သော ဟင်းရံများနှင့် တွဲဖက်စားသောက်ကြသည်။ အဓိကပါဝင်သော ဟင်းချက်စရာများမှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ (အထူးသဖြင့် ငရုတ်သီး)၊ အုန်းနို့၊ ငါး နှင့် ကြက်သားတို့ ဖြစ်သည်။ 
ထင်ရှားသော အစားအစာများဖြစ်သော နာဆီဂိုရင်း၊ ဂါဒိုး-ဂါဒိုး၊ ဆာတေး နှင့် ဆိုတို တို့ကို နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရပြီး အမျိုးသား ဟင်းလျာများဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တန်ပန်း အား အမျိုးသားဟင်းလျာ အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ထိုဟင်းလျာတွင် အမျိုးမျိုးသော ဟင်းချက်သည့် ရိုးရာပေါင်းစုံ ရောစပ်ပါဝင်နေသည်ဟု ဖော်ပြထားခဲ့သည်။  အခြား ရေပန်းစားသော အစားအစာတစ်ခုမှာ ရန်ဒန်း ဖြစ်ပြီး ဒန်ဒန်း နှင့် ဂူလိုင်းတို့ကဲ့သို့သော ပဒန်းအစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စီအင်န်အင်န် သတင်းဌာန၏ ခရီးသွား စာဖတ်သူများ၏ ရွေးချယ်မှုမှ ရန်ဒန်းအား ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရသာ အရှိဆုံး အစားအစာ အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။  အခြားသော အချဉ်ဖောက်ထားသည့် အစားအစာ တစ်မျိုးမှာ အွန်ကွန်း ဖြစ်ပြီး တန်ပေး နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူသော်လည်း တန်ပေးကဲ့သို့ ပဲပိစပ်တစ်မျိုးတည်းကို အခြေခံထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ မှိုအမျိုးမျိုးမှ ပြုလုပ်ထားသော အစားအစာမျိုးစုံကို အခြေခံထားကာ အနောက်ဂျားဗားတွင် ပိုမိုလူကြိုက်များ ထင်ရှားသည်။
ဝါယန်ဝေါင်း ဖျော်ဖြေမှုအတွင်း ပန္ဒာဗ နှင့် ခရစ်သျှန အဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေပုံ
ဂျားဗား၊ ဆွန်ဒါး နှင့် ဘာလီတို့၏ ရုပ်သေးပြဇာတ်ဖြစ်သော ဝါယန် ဇာတ်ရုံဖျော်ဖြေမှုတွင် ဒဏ္ဍာရီလာ ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သော ရာမယဏ နှင့် မဟာဘာရတ တို့ကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြသည်။အမျိုးမျိုးသော ဘာလီ အက ပြဇာတ်များသည်လည်း အင်ဒိုနီးရှားပြဇာတ်၏ ရိုးရာပုံစံတွင် ပါဝင်သည်။ အခြားသော ဒေသဆိုင်ရာ ပြဇာတ်များမှာ ဂျားဗားတို့၏ လူဒရက် နှင့် ကီတိုပရက်၊ ဆွန်ဒါး တို့၏ စန်ဒီဝါရာ နှင့် ဘီတာဝီ တို့၏ လီနောင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။  ထိုပြဇာတ်များတွင် ဟာသ နှင့် ပြက်လုံးများထည့်သွင်းထားပြီး မကြာခဏဆိုသလိုပင် ပရိသတ်များအား ဝင်ရောက်ကပြစေသည်။  အချို့သော ပြဇာတ်ရုံဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုများတွင် ပြဇာတ်တစ်ခုတည်းသာ မကဘဲ ဂီတ၊ အက နှင့် အနောက်ဆူမတ်တြာမှ မင်နန်ကာဘောင်းလူမျိုးတို့၏ ရန်ဒိုင်း ကဲ့သို့သော ဆီလတ်ကိုယ်ခံပညာများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ထိုဖျော်ဖြေမှုများကို ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုးရာအခမ်းအနားများနှင့် ပွဲတော်များတွင် တက်ဆက်လေ့ ရှိကြပြီး  သမိုင်းကြောင်း တစိတ်တပိုင်းပါဝင်နေသော မင်နန်ကာဘောင်း ဒဏ္ဍာရီများ နှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းများပေါ်တွင် အခြေခံကြသည်။ ယနေ့ခေတ် ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာများလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ထွန်းကားပြီး ၎င်းတို့တွင် သီးသန့် ပြဇာတ်စတိုင်လ် ရှိသည်။ ထင်ရှားသော ပြဇာတ်ရုံ၊ အကနှင့် ကဇာတ် အဖွဲ့များတွင် "တီးတာ ကိုမာ" ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များသည် နိုင်ငံအတွင်း ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး အင်ဒိုနီးရှား လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သရော်မှုများ ပါဝင် ဖျော်ဖြေလေ့ ရှိသည်။
ဒတ်ချ်အရှေ့အိန္ဒိယတွင် ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင် ဖြစ်သည့် "လိုတိုရန် ကာဆာရိုအန်း" ၏ ကြော်ငြာ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်း၌ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့သော ရုပ်ရှင်မှာ ဒတ်ချ် ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ အယ်လ် ဟျူးဗယ်လ်ဒေါ့ပ် ရိုက်ကူးသည့် အသံတိတ် ရုပ်ရှင်ကား လိုတိုရန် ကာဆာရိုအန်း ဖြစ်သည်။ ဆူဒါးနိစ် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကို ယူ၍ ရိုက်ကူးထားသော ထိုရုပ်ရှင်တွင် အင်ဒိုနီးရှား သရုပ်ဆောင်များက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြပြီး ဘန်ဒေါင်းရှိ အင်န်ဂျေ ဂျားဗား ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာ အလျှင်အမြန် တိုးတက်ပြန့်ပွားလာခဲ့ပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင် ၆ ကားသာ ထုတ်လုပ်ရာမှာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ၅၈ ကား အထိ ထုတ်လုပ်လာခဲ့သည်။ ဂျာမာလူဒင် မာလစ် ၏ ပါဆာရီရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်ပုံစံ ရုပ်ရှင်များနှင့် ဟောလိဝုဒ်၏ စတူဒီယိုစနစ် အလုပ်လုပ်ပုံများ ကို အတုခိုးရိုက်ကူးသည့် အပြင် ထင်ရှားသော အိန္ဒိယရုပ်ရှင်များကိုလည်း ပြန်လည် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။  ဆူကာနို အစိုးရမှ ရုပ်ရှင်ရုံများကို အမျိုးသားရေး နှင့် အနောက်တိုင်းဆန့်ကျင်ရေး အတွက် အသုံးချခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်များကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဆူကာနိုအား ဖြုတ်ချပြီးနောက် နယူးအော်ဒါ အစိုးရလက်ထက်တွင် ရုပ်ရှင်များကို လူထုငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု ရှိစေရန် ဆင်ဆာဖြတ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၏ ရေပန်းစားမှုမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ရုံများ အရေးပါထင်ရှားခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် သိသာစွာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ထိုကာလ အတွင်း ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်များတွင် ပင်တာ-ပင်တာ ဘိုးဒိုး (၁၉၈၂) ၊ မာဂျူး ကနား မွန်ဒါ ကနား (၁၉၈၄) ၊ နာဂါဘိုနာ (၁၉၈၇)၊ ကာတာတံ ဆီ ဘွိုင်း (၁၉၈၉) နှင့် ဝါးကော့ပ်၏ ဟာသကား များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်အခါက ကျော်ကြားသော သရုပ်ဆောင်များတွင် ဒက်ဒီ မစ်ဇဝါ၊ အီဗာ အာနက်ဇ်၊ မယ်ရီယံ ဘယ်လင်နာ နှင့် ရာနို ကာနို တို့ ပါဝင်ကြသည်။
ဆူဟာတိုခေတ်အပြီးတွင် လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်များသည် ယခင်က ပိတ်ပင်ထားသော ခေါင်းစဉ်များဖြစ်သည့် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး နှင့် အချစ်တို့ အကြောင်း စတင်ဖော်ပြလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကြားတွင် နှစ်တိုင်း ထုတ်လုပ်သော ရုပ်ရှင်များသည် တဖြည်းဖြည်း များပြားလာခဲ့သည်။  မျိုးဆက်သစ်ရုပ်ရှင်လောကသား ထင်ရှားသူများတွင် ရီရီ ရီဇာ နှင့် မီရာ လက်စ်မာနာတို့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှ ကာလ်ဒီဆက် (၁၉၉၉)၊ ပီတွာလန်ဂန် ရှယ်ရီနာ (၂၀၀၀)၊ အဒါ အပါ ဒန်ဂန် ဆင်တာ?(၂၀၀၂) နှင့် လက်ဆကာ ပီလန်ဂီ (၂၀၀၈) အစရှိသော ရုပ်ရှင်ကားများကို တွဲဖက် ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် "ဝါကော့ပ် ဒီကေအိုင် ရီဘွန်း ၊ ဂျန်ကရစ် ဘော့စ် အပိုင်း ၁ အမည်ရသော ရုပ်ရှင်ကားသည် ရုံတင်ကား စံချိန်ကို ချိုးခဲ့ပြီး လက်မှတ်ပေါင်း ၆.၈ သန်းမျှ ရောင်းရကာ အင်ဒိုနီးရှားတွင် လူကြည့်အများဆုံး ရုပ်ရှင် အဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့သည်။  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ နှင့် ဆုပေးပွဲများကို နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစ၍ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ကျင်းပခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှား ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်လောကသားများကြားတွင် ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံး ဖြစ်သော ဆီထရာ ဆုကိုလည်း ချီးမြှင့်လေ့ ရှိသည်။ ၁၉၇၃ မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အထိ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် ရပ်တန့်ခဲ့ကာ ၂၀၀၄ တွင်မှ တဖန်ပြန်လည် ကျင်းပခဲ့သည်။
ကိုယ်ခံပညာတစ်ခု ဖြစ်သော ပန်ဆပ် ဆီလပ် ကို သရုပ်ပြနေပုံ
အားကစားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ယောက်ျားလေးများ အတွက် ဖြစ်ပြီး ပွဲကြည့်သူများမှာ အများအားဖြင့် တရားမဝင် လောင်းကစားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြသည်။ နိုင်ငံအတွင်း ရေပန်းအစားဆုံး အားကစားများမှာ ကြက်တောင်ရိုက် နှင့် ဘောလုံး ကစားနည်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှား ကြက်တောင်ရိုက်ကစားသမားများသည် ကမ္ဘာ့ အမျိုးသား အသင်းလိုက် ကြက်တောင်ရိုက် ပြိုင်ပွဲဖြစ်သော သောမတ်စ် ဖလားအား ၁၉၄၉ ခုနှစ် စတင်သည့် အချိန်မှစ၍ ၁၃ ကြိမ်တိုင် ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် အိုလံပစ် အားကစားအဖြစ် အပြည့်အဝ အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် အချိန်မှစ၍ အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် အမျိုးမျိုးကို ရရှိခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီး ကြက်တောင်ရိုက် ကစားသမားများသည် အမျိုးသမီးများ အတွက် သောမတ်စ်ဖလား နှင့် အလားသဏ္ဍန် တူသော အူဘာ ဖလားကို ၁၉၇၅၊ ၁၉၉၄ နှင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တို့တွင် ရရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်တန်း ဘောလုံးလိဂ်မှာ လီဂါ ၁ ဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှား ဘောလုံးအသင်းသည် ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် ဒတ်ချ် အရှေ့အိန္ဒိယ အသင်း အဖြစ် ပထမဆုံး ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့သော အာရှဘောလုံး အသင်းဖြစ်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် အောင်မြင်မှု အနည်းငယ်သာ ရရှိခဲ့သည်။ အာရှတိုက်အတွင်း၌မူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘောလုံးအသင်းသည် ၁၉၅၈ ခု အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကြေးတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် အာရှ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အာရှဖလားတွင် ပထမဆုံး ပါဝင်ခဲ့သော နှစ်မှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ၃ ကြိမ် ဆက်တိုက် ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အကြိမ်တိုင်းတွင် နောက်ထပ်တဆင့်သို့ မတက်နိုင်ခဲ့ပေ။
အခြားရေပန်းစားသော အားကစားနည်းများတွင် လက်ဝှေ့နှင့် ဘတ်စကက်ဘောတို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့မှာ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းရှိကြကာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် အမျိုးသား အားကစားပွဲ ကတည်းကပင် ပါဝင်ခဲ့သည်။  ထင်ရှားသော အင်ဒိုနီးရှား လက်ဝှေ့ကစားသမား အချို့မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လက်ဝှေ့အဖွဲ့ချုပ်၏ စူပါဖလိုင်းဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ ၃ ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့သူ အယ်လီယပ် ပီကယ် နှင့် အခြား လက်ဝှေ့ကစားသမားများ ဖြစ်သော နီကို သောမတ်စ်၊ မိုဟာမက် ရပ်ချ်မန်း နှင့် ခရစ် ဂျွန် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ အားကစားနည်းတွင်မူ ရိုင်ယို ဟာရန်တို သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖော်မြူလာဝမ်း ကားပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား ဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှား ရိုးရာ အားကစားနည်းများ အနေဖြင့် ဥပမာပြရမည် ဆိုလျှင် ဆီပတ် ကက်ခ်ရော ခေါ် ပိုက်ကျော်ခြင်း ကစားနည်း နှင့် မာဒူရာရှိ ကာရာပန် ဆာပီ ခေါ် နွားပြိုင်ပွဲတို့ ရှိသည်။ လူမျိုးစု စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ သမိုင်းကြောင်းရှိသော ဒေသများတွင် ဟန်ပြတိုက်ခိုက်ခြင်း ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပကြပြီး ဖလော်ရက်စ်ရှိ ကာစီ ကစားပွဲ နှင့် ဆွန်ဘာရှိ ပါဆိုလာ ကစားပွဲ အစရှိသည် တို့ ဖြစ်သည်။ ပန်ဆပ် ဆီလပ် သည် အင်ဒိုနီးရှား ကိုယ်ခံပညာ ကစားနည်းဖြစ်ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတွင် ပါဝင်သော ကစားနည်းတစ်မျိုး ဖြစ်လာခဲ့ကာ အင်ဒိုနီးရှားသည် ဦးဆောင်ကစားသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင်မူ အင်ဒိုနီးရှားသည် အဓိက အာကစား စွမ်းအားစုရှိရာ နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတွင် ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဆယ်ကြိမ်တိုင် အနိုင်ရခဲ့ကာ လတ်တလော အနေနှင့် ၂၀၁၁ တွင် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ အာရှ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဆူဇူကီးဖလားပွဲကို သတင်းပေးပို့နေသော မက်ထရို တီဗွီကို ဂီလိုရာ ဘန် ကာနို အားကစားရုံတွင် တွေ့ရစဉ်
နယူးအော်ဒါ အစိုးရ လက်ထက်တွင် ယခု ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သော ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်တွင်းမီဒီယာများကို စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်၍ ပြည်ပမီဒီယာများကို ကန့်သတ်ခဲ့သော်လည်း နယူးအော်ဒါ အစိုးရ အလွန်တွင် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်မှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။  ရုပ်မြင်သံကြား ဈေးကွက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လွှင့်မှု ကွန်ယက်များ နှင့် ပြည်နယ်တွင်း ကွန်ယက်များ ရှိကာ ၎င်းတို့သည် အများပြည်သူသို့ အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်သည့် တီဗီအာရ်အိုင် နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကြကာ တီဗီအာရ်အိုင်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ် အထိ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုကို တစ်ဦးတည်း လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားခဲ့သည်။ ၂၁ ရာစု အစောပိုင်းမှစ၍ တိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကြောင့် တီဗွီလွှင့်လှိုင်းများသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျေးရွာတိုင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပြည်သူများအနေနှင့် ချန်နယ် ၁၁ ခု အထိ ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ကြသည်။ ပုဂ္ဂလိက ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများမှ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် သတင်းများကို ထုတ်လွှင့်သကဲ့သို့ နိုင်ငံခြား ထုတ်လွှင့်သူများမှ ပေးပို့သော အစီအစဉ်များကိုလည်း ထုတ်လွှင့်ကြသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု အရေအတွက်မှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ သိသာစွာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်ရောင်းချရသော မိုဘိုင်းဖုန်း အရေအတွဉ်မှာ သန်း ၃၀ ကျော်ရှိပြီး ၂၇% မှာ ပြည်တွင်း အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်ကြသည်။ 
အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် အင်ဒိုနီးရှားသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းမှစ၍ အင်တာနက် ဖွံ့ဖြိုးမှု စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှာ ပီတီ အင်ဒို အင်တာနက်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ဂျကာတာမြို့မှ စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုသူပေါင်း ၈၈သန်းမျှ ရှိသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အရေအတွက် အများဆုံး နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။  သို့သော်လည်း လူထုကြားသို့ အင်တာနက် ထိုးဖောက်နိုင်မှုမှာ နည်းပါးသေးသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အများစုမှာ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်တွင်း ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ အင်တာနက် အသုံးပြုချိန် ၄.၇ နာရီမျှ ရှိ၍။  အဓိကအားဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုရန် မိုဘိုင်းဖုန်းကို အသုံးပြုကြပြီး မိုဘိုင်ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူမျာ လက်ပ်တော့ပ် ကွန်ပျူတာများ စားပွဲတင် တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာများဖြင့် အသုံးပြုသူများထက် ပို၍ များပြားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ စာပေအတွက် ရှေးအကျဆုံးသော သက်သေအထောက်အထားမှာ ၅ ရာစုမှ သင်္သကရိုက်ဘာသာ ဖြင့် ရေးသားထားသော ကျောက်ထွင်းစာများဖြစ်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ လူအများစုသည် ပါးစပ်ပြော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများတွင် ခိုင်မာစွာ အမြစ်တွယ်နေကြပြီး ထိုအကြောင်းအရာမှပင် သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စရိုက်လက္ခဏာများကို ဖော်ပြနေသကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးလျက် ရှိသည်။  စာထက် အက္ခရာတင်ထားသော ကဗျာ နှင့်စာများတွင် ရိုးရာပုံစံ အချို့က ကြီးစိုးလျက် ရှိကြပြီး အဓိက အားဖြင့် ဆိုင်းအဲယား၊ ပန်တွန်း၊ ဂူရင်ဒမ်၊ ဟီကာယက် နှင့် ဘာဘက် ပုံစံတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုပုံစံထဲမှ ထင်ရှားသော စာအချို့မှာ ဆိုင်းအဲယား ရာဂျာ ဆီယက်၊ ဆိုင်းအဲယား အဘဒူ မူလက်၊ ဟီကာယက် အဘဒူလာ၊ ဟီကာယက် ဘာယန် ဘူဒီမန်၊ ဟီကာယက် ဟန်တွား၊ ဆူလာလာတပ်စ် ဆာလာတင် နှင့် ဘာဘက် တာနာ ဂျာဝီ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ခေတ်သစ် အင်ဒိုနီးရှား စာပေ၏ အစောပိုင်းစာများသည် ဆူမတ်တြာ ယဉ်ကျေးမှုမှ မြစ်ဖျားခံသည်။  ၁၉၂၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဘာလိုင်း ပူစတာကာ ဟုခေါ်သော အစိုးရ၏ ခေတ်ပေါ်စာပေ ဗျူရိုကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း စာပေများ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် တွန်းအားပေး မြှင့်တင်ခဲ့ကာ မလေးစာကို အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကူးလူးဆက်ဆံရာတွင်ကြားခံ အဖြစ် အဓိကသုံးရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှား ခေတ်သစ်စာပေတွင် ထင်ရှားသူများမှာ ဒတ်ချ်တို့၏ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုတွင် ဒေသခံတို့အား ဆက်ဆံပုံကို ဝေဖန်သော ဒတ်ချ်စာရေးဆရာ မာလ်တာတူလီ၊ လွတ်လပ်ရေးမရမီက ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ရှိသည့် မျိုးချစ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်သည့် မိုဟာမက် ယာမင် နှင့် ဟမ်ကာ အင်ဒိုနီးရှား၏ အကျော်ကြားဆုံး ဝတ္ထုရေးဆရာ ပစ္စည်းမဲ့ စာရေးဆရာ ပရာမိုးဒြား အနန်တာ တိုယာ တို့ ပါဝဝင်သည်။  ပရာမိုးဒြားသည် စာပေဆိုင်ရာ ဆုအချို့ကို ရရှိခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှမှ စာပေဆိုင်ရာ နိုဘဲလ်ဆု ရသင့်သော စာရေးဆရာ တစ်ဦးအဖြစ် မကြာခဏ ဆွေးနွေးလေ့ ရှိကြသည်။
စာပေနှင့် ကဗျာတို့သည် ၂၀ ရာစု၏ ပထမတစ်ဝက်တွင် ပိုမို၍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ အဓိကစာရေးဆရာများတွင် ချိုင်ရေး အန်နဝါ၊ အာကူး၊ မာရာ ရိုစလီ၊ ဆီတီ နာဘာရာ၊ မယ်ရာရီ ဆီရဲဂါ၊ အာဇပ် ဒန် ဆန်ဆာရာ၊ အဘဒူ မြူးအစ်၊ ဆာလာ အဆူဟန်၊ ဂျာမာလူဒင် အဒီနီဂိုရို၊ ဒါရာမူဒါ၊ ဆူတန် တက်ဒါ အလစ်ဂျာဘာနာ၊ လာယာ တာကန်ဘမ် နှင့် အမီ ဟပ်ဇမာ (ညာညီ ဆူညီ) တို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့၏ စာနှင့် ကဗျာများမှာ အဏ္ဏဝါ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် အထူးသဖြင့် လူသိများသည်။ 
အင်ဒိုနီးရှားတွင် နှစ်စဉ် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရုံးပိတ်ရက် ၁၃ ရက်မှ ၁၇ ရက် အထိ ရှိသည်။ အစိုးရမှ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျူတီ ဘာဆမာ ဟုခေါ်သော စုပေါင်းခွင့်ကို ကြေညာလေ့ ရှိပြီး နိုင်ငံတော် ရုံးပိတ်ရက် နှင့် ဆက်နေသော တနင်္လာ သို့မဟုတ် သောကြာနေ့ကို ခွင့်ရက် အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ စနေတနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်ရှည် အဖြစ်ဖန်တီးပေးလေ့ ရှိသည်။ ရုံးပိတ်ရက် ၄ မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံတကာ နှင့် အမှတ်တရ နေ့ရက်များ ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းတွင် ထိုနေ့များအား တန်ဂယ် မီရာ သို့မဟုတ် ရက်စွဲနီ ဟု သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြပြီး ပြက္ခဒိန်ပေါ်တွင် အနီရောင် ရက်စွဲ အဖြစ် ဖော်ပြလေ့ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရုံးပိတ်ရက်များမှာ ပြက္ခဒိန် အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် အခြေခံ သဖြင့် တစ်နှစ်နှင့် တစ်နှစ် မတူကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့် မွတ်စလင် ရုံးပိတ်ရက်များမှာ အစ္စလာမ် ပြက္ခဒိန်ကို အခြေခံသော်လည်း အခြားဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ရက်များ ဖြစ်သော ခရစ်ယာန် အီစတာ၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကဆုန်လပြည့်နေ့တို့မှာ လ ပေါ် အခြေခံသော ပြက္ခဒိန်ဖြင့် တွက်ချက်လေ့ ရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
အလယ်ဂျားဗားရှိ ဗောရောဗုဓော ဘုရားတွင် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ကျင်းပနေစဉ်
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နှစ်သစ်ကူးနေ့ တာဟွန်း ဘာရူး မာဆဲဟီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဇန်နဝါရီ–ဖေဖော်ဝါရီ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး တာဟွန်း ဘာရူး အင်မလက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
မတ်လ/ကာဆာ ၁ ပါဝူကွန် ၄၀ ဆိတ်ငြိမ်နေ့ ဘာလီနှစ်သစ်ကူးနေ့ ဟာရီ ရာယ နိုင်ပီ (တာဟွန်း ဘာရူး ဆာကာ) ဘာသာရေး
မတ်–ဧပြီ ဂွတ် ဖရိုင်းဒေး ဝါဖတ် ယီးဆပ် ခရစ်တပ် (ဂျူမက် အာဂေါင်း) ဘာသာရေး
မေလ ၁ အလုပ်သမားနေ့ ဟာရီ ဘူရား အင်တာနေရှင်နယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
မေ–ဇွန် ယေရှုခရစ် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရောက်သောနေ့] ကီနိုင်ကန် ယီးဆပ် ခရစ်စတပ် ဘာသာရေး
မေ–ဇွန် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဝိုင်းဆပ် ဘာသာရေး
ရာဂျပ်ဘ် ၂၇ တမန်တော် ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ရောက်သောနေ့ အစ်ဆရာ မီရပ်ဂျ် နာဘီ မူဟာမက် ဘာသာရေး
မေလ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ဟာရီ ရာယ ဝိုင်းဆပ် ဘာသာရေး
ဇွန်လ ၁ရက် ပန်ကာဆီလာနေ့ ဟာရီ လာဟီး ပန်ကာဆီလာ အမှတ်တရ
ရှောဝယ် ၁–၂ စမိုင်အစ်နေ့ ဟာရီ ရာယ အီဒူလ် ဖီထရီ ဘာသာရေး
ဩဂုတ် ၁၇ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဟာရီ ကယ်မာဒက်ကန်း ရီပတ်ဘလစ် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတော်
ဒူ အယ်လ်ဟစ်ဂျား ၁၀ ဘက္ကဒီးအစ်နေ့ ဟာရီ ရာယ အီဒူ အက်ဒဟာ ဘာသာရေး
မူဟာရမ် ၁ အစ္စလာမ် နှစ်သစ်ကူး တာဟွန်း ဘာရူး ဟစ်ဂျ်ရီယာ့ ဘာသာရေး
ရာဘီ အယ်လ်အော်ဝယ် ၁၂ တမန်တော် မိုဟာမက် မွေးနေ့ မောလစ် နာဘီ မူဟာမက် ဘာသာရေး
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် ခရစ္စမတ်နေ့ ဟာရီ ရာယ နာတာ ဘာသာရေး
နိုင်ငံတော် အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ
ဝိစမာ ၄၆၊ အင်ဒိုနီးရှား၏ အမြင့်ဆုံး မိုးမျှော်တိုက်၊ ဂျကာတာရှိ မိုးမျှော်တိုက်များ အလယ်တွင်ရှိသည်။
ဂျလန်း သာမရင်း၊ ဂျကာတာဗဟိုရှိ အဓိကလမ်းမကြီး
↑ ၁.၀ ၁.၁ Jumlah dan Distribusi Penduduk။ BPS (May 2010)။ 13 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ The World Factbook: Indonesia။ Central Intelligence Agency (12 December 2017)။ 10 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia - The Next Major Oil Importer?။ Seeking Alpha (10 January 2017)။6February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Highest population, island။ Guinness World Records။6June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Salikha, Adelaida (29 January 2018)။ Meet The 10 Megadiverse Countries In The World။ SEAsia။ 8 February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Indonesia။ The Observatory of Economic Complexity (2016)။ 1 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Workman, Daniel (26 December 2017)။ Indonesia's Top Trading Partners။ World's Top Exports။ 25 February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Burhanudin, Jajat; van Dijk, Kees (31 January 2013)။ Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations။ Amsterdam University Press။ 17 November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lamoureux, Florence (2003)။ Indonesia: A Global Studies Handbook။ ABC-CLIO Corporate။ 17 November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Tomascik, T.; Mah, J.A.; Nontji, A.; Moosa, M.K. (1996)။ The Ecology of the Indonesian Seas – Part One။ Hong Kong: Periplus Editions။ ISBN 962-593-078-7။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Anshory, Irfan (16 August 2004)။ The origin of Indonesia's name။ Pikiran Rakyat။ 15 December 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Justus M van der Kroef (1951). "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". Journal of the American Oriental Society 71 (3): 166–171. doi:10.2307/595186.
↑ Brown, Colin (2003)။ A short history of Indonesia: the unlikely nation?။ Allen & Unwin။ p. 13။ ISBN 1-86508-838-2။
↑ "Shell tool use by early members of Homo erectus in Sangiran, central Java, Indonesia: cut mark evidence" (2007). Journal of Archaeological Science 34. doi:10.1016/j.jas.2006.03.013.
↑ Finding showing human ancestor older than previously thought offers new insights into evolution။ TerraDaily (5 July 2011)။ 27 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pope, G.G. (1988). "Recent advances in far eastern paleoanthropology". Annual Review of Anthropology 17: 43–77. doi:10.1146/annurev.an.17.100188.000355. cited in Whitten, T.; Soeriaatmadja, R.E.; Suraya, A.A. (1996)။ The Ecology of Java and Bali။ Hong Kong: Periplus Editions။ pp. 309–412။ ; Pope, G.G. (1983). "Evidence on the age of the Asian Hominidae". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 80 (16): 4988–4992. doi:10.1073/pnas.80.16.4988. PMID 6410399. ; "Dating hominid sites in Indonesia" (1994). Science 266 (16): 4988–4992. doi:10.1126/science.7992059.
↑ Gugliotta, Guy (July 2008)။ The Great Human Migration။ Smithsonian Maganize။ 21 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shelby, Karen။ Buddhist Art and Architecture in Southeast Asia After 1200။ Art History Teaching Resources။ 20 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Coedès, George (1968)။ The Indianized States of South-East Asia။ University of Hawaii Press။ 21 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ Ricklefs 1991, pp. 12–14.
↑ van Elderen, Wieze။ The Dutch East India Company။ European Heritage Project။6September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ricklefs 1991; "Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves" (1998). Eighteenth-Century Studies 31 (3): 349–55. doi:10.1353/ecs.1998.0021.
↑ Indonesia: World War II and the Struggle for Independence, 1942–50; The Japanese Occupation, 1942–45။ Library of Congress (November 1992)။ 11 February 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ H.J. Van Mook (1949). "Indonesia". Royal Institute of International Affairs 25 (3): 274–285.
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ Charles Bidien (5 December 1945). "Independence the Issue". Far Eastern Survey 14 (24): 345–348. doi:10.1525/as.1945.14.24.01p17062.
↑ Indonesian War of Independence။ Global Security။ 10 December 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Marni Cordell (28 August 2013)။ The West Papuan independence movement -ahistory။ The Guardian။ 16 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chris Hilton (writer and director) (2001)။ Shadowplay (Television documentary)။ Vagabond Films and Hilton Cordell Productions။
↑ Indonesia's killing fields။ Al Jazeera (21 December 2012)။ 14 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gellately, Robert; Kiernan, Ben (July 2003)။ The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective 290–291။ Cambridge University Press။ 26 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chapter 5, Justice Betrayed: Post-1945 Responses to Genocide Aarons, Mark (December 2007)။ The Legacy of Nuremberg: Civilising Influence or Institutionalised Vengeance?။ Brill Publishers။5July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ John D. Legge (1968). "General Suharto's New Order". Royal Institute of International Affairs 44 (1): 40–47.
↑ Delhaise, Philippe F (1998)။ Asia in Crisis: The Implosion of the Banking and Finance Systems။ Willey။ p. 123။ ISBN 0-471-83450-5။
↑ President Suharto resigns။ BBC (21 May 1998)။ 14 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975: New Documents Detail Conversations with Suharto။ National Security Archive (6 December 2001)။ 10 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Carter Center 2004 Indonesia Election Report။ The Carter Center။ 14 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ethnic and Religious Violence in Indonesia။ Indonesia Investments (23 December 2016)။ 17 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aceh rebels sign peace agreement။ BBC (15 August 2005)။ 14 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hidayat, Rafki (7 June 2017)။ Indonesia counts its islands to protect territory and resources။ BBC။5July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Republic of Indonesia။ Microsoft Encarta (2006)။ 1 November 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 November 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Climate: Observations, projections and impacts။ Met Office Hadley Centre။ 16 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၇.၀ ၆၇.၁ Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies။ World Bank။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia: Volcano nation။ BBC (5 November 2015)။ 28 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Whitten, T; Soeriaatmadja, R. E.; Suraya A. A. (1996)။ The Ecology of Java and Bali။ Hong Kong: Periplus Editions Ltd.။ pp. 95–97။
↑ Sylviane L. G. Lebon (January 2009)။ Volcanic activity and environment: Impacts on agriculture and use of geological data to improve recovery processes။ University of Iceland။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ David Bressan (11 August 2017)။ Early Humans May Have Lived Through A Supervolcano Eruption။ Forbes။ 11 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jonathan Amos (30 April 2013)။ Toba super-volcano catastrophe idea 'dismissed'။ BBC။ 15 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Charles Q. Choi (29 April 2013)။ Supervolcano Not to Blame for Humanity's Near-Extinction။ Live Science။2October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tambora။ Volcano Discovery (29 May 2016)။ 20 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The 1883 Krakatoa Explosion Made the Loudest Sound in History–So Loud It Traveled Around the World Four Times။ Open Culture (20 December 2017)။4January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ David Bressan (31 August 2016)။ The Eruption of Krakatoa Was the First Global Catastrophe။ Forbes။2September 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UN Office of the Special Envoy for Tsunami Recovery။ United Nations (25 March 2007)။ 19 May 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mumtazah, Hani (22 May 2003)။ Indonesia's Natural Wealth: The Right ofaNation and Her People။ Islam Online။ 17 October 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia (in Norwegian)။ United Nations Association of Norway (18 December 2014)။ 19 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Whitten, T.; Henderson, G.; Mustafa, M. (1996)။ The Ecology of Sulawesi။ Hong Kong: Periplus Editions Ltd.။ ISBN 962-593-075-2။ ; Monk, K.A.; Fretes, Y.; Reksodiharjo-Lilley, G. (1996)။ The Ecology of Nusa Tenggara and Maluku။ Hong Kong: Periplus Editions Ltd.။ ISBN 962-593-076-0။
↑ Indonesia။ InterKnowledge Corp (6 October 2006)။ 15 October 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lambertini, Marco (10 April 2011)။ A Naturalist's Guide to the Tropics, excerpt။ The University of Chicago Press။5February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tamindael, Otniel (17 May 2011)။ Coral reef destruction spells humanitarian disaster။ Antara News။ 25 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၅.၀ ၈၅.၁ Severin, Tim (1997)။ The Spice Island Voyage: In Search of Wallace။ Great Britain: Abacus Travel။ ISBN 0-349-11040-9။
↑ Wallace, A.R. (2000) ။ The Malay Archipelago။ Periplus Editions။ ISBN 962-593-645-9။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ Miller, Jason R. (14 August 2007)။ Deforestation in Indonesia and the Orangutan Population။ TED Case Studies။ 11 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 August 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၈.၀ ၈၈.၁ Environmental Performance Index: 2016 report။ Yale University (2016)။4October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၉.၀ ၈၉.၁ McClanahan, Paige (11 September 2013)။ Can Indonesia increase palm oil output without destroying its forest?။ The Guardian။ 17 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Marcus Colchester; Normal Jiwan; Andiko, Martua Sirait; Asup Y. Firdaus; A. Surambo; Herbert Pane (26 March 2012)။ Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous People။ 31 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BirdLife International (2015). "Leucopsar rothschildi". IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T22710912A78289078.en. Retrieved on 17 March 2016.
↑ Extinction crisis escalates: Red List shows apes, corals, vultures, dolphins all in danger။ International Union for Conservation of Nature (12 September 2007)။ 16 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ van Strien, N.J. (2008). "Rhinoceros sondaicus". The IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T19495A8925965.en.
↑ ၉၄.၀ ၉၄.၁ Dwi Harijanti, Susi; Lindsey, Tim (1 January 2006). "Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court". International Journal of Constitutional Law4(1): 138–150. doi:10.1093/icon/moi055. Retrieved on 14 January 2018.
↑ ၉၇.၀ ၉၇.၁ ၉၇.၂ The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia။ International Labour Organization။ 11 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၈.၀ ၉၈.၁ Pope, Timothy ; Longmuir, Scott (3 April 2014)။ Indonesia's parliamentary and presidential elections: How does the system work?။ ABC News။ 12 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cammack, Mark E.; Feener, R. Michael (January 2012)။ The Islamic Legal System in Indonesia။ Pacific Rim Law & Policy Journal။ 1 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cochrane၊ Joe။ "Governor of Jakarta Receives His Party's Nod for President"၊ The New York Times၊ 15 March 2014။3February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2017။
↑ KPU Successfully Set and Authorize Pileg Results On Time။ Indonesia Election Portal (10 May 2014)။ 23 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wardah, Fathiyah (10 May 2014)။ KPU:2Parpol Tak Penuhi Ambang Batas Parlemen (in id)။ VOA Indonesia။ 23 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ House Agrees on Creation of Indonesia's 34th Province: 'North Kalimantan'။ The Jakarta Globe (22 October 2012)။ 16 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Simanjuntak, Hotli (18 August 2008)။ Finally, Aceh local parties to take part in general election။ The Jakarta Post။ 16 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The positions of governor and its vice governor are prioritised for descendants of the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam, respectively, much likeasultanate. (Elucidation on the Indonesia Law No. 22/1999 Regarding Regional Governance. People's Representative Council (1999). Chapter XIV Other Provisions, Art. 122; Indonesia Law No. 5/1974 Concerning Basic Principles on Administration in the Region။ 28 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 September 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (146 KB) (translated version). The President of Republic of Indonesia (1974). Chapter VII Transitional Provisions, Art. 91)
↑ Part of the autonomy package was the introduction of the Papuan People's Council, which was tasked with arbitration and speaking on behalf of Papuan tribal customs. However, the implementation of the autonomy measures has been criticised as half-hearted and incomplete. "Another Fine Mess in Papua"၊ The Jakarta Post၊ 18 November 2004၊ စာ- 6။
↑ Papua Chronology Confusing Signals from Jakarta။ The Jakarta Post (18 November 2004)။ 15 January 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 January 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Péter, Klemensits; Márton, Fenyő (16 August 2017)။ The Foreign Policy of Indonesia In Light of President Jokowi's "Visi-Misi" Program။ Pázmány Péter Catholic University။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia - Foreign Policy။ U.S. Library of Congress။ 27 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ U.S. Relations With Indonesia။ U.S. Department of State (17 January 2017)။ 15 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kristof, Nicholas D. (4 July 1990)။ China and Indonesia SignaPact To Restore Ties Severed in 60's။ The New York Times။ 27 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Muraviev, Alexey; Brown, Colin (December 2008)။ Strategic Realignment or Déjà vu? Russia-Indonesia Defence Cooperation in the Twenty-First Century။ Australian National University။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order (25 February 2015)။ 19 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jensen, Fergus; Asmarini, Wilda။ Net oil importer Indonesia leaves producer club OPEC, again။ Reuters။ 1 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ International Cooperation and Development။ European Commission (17 January 2018)။ 17 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wilson, Chris (11 October 2001)။ Indonesia and Transnational Terrorism။ Parliament of Australia။6November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။; Huang, Reyko (23 May 2002)။ Priority Dilemmas: U.S. – Indonesia Military Relations in the Anti Terror War။ Center for Defense Information။ 12 October 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Services to honour victims of 2002 Bali bombing။ The Age (12 October 2005)။ 1 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 April 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Travel Warning - Indonesia။ U.S. Embassy Jakarta (10 May 2006)။ 11 November 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 November 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chew, Amy (7 July 2002)။ Indonesia military regains ground။ CNN။ 14 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dharma Agastia (1 November 2016)။ Uphill battle for Indonesia's defense modernization။ The Jakarta Post။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jessica Vincentia Marpaung (17 June 2016)။ TNI's Gold Mine: Corruption and Military-Owned Businesses in Indonesia။ The Global Anti Corruption Blog။ 18 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stephen Wright။ Indonesia: Army's influence sparks fear for democracy။ The Scotsman။ 18 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fabi, Randy & Kapoor, Kanupriya (19 May 2016)။ Indonesia's 'red scare' stokes unease over military's growing influence။ Reuters။ 18 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia Faces3Separatist Movements။ Los Angeles Times (9 September 1990)။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Papua: Answer to Frequently Asked Questions။ International Crisis Group (5 September 2006)။ 18 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Economy of Indonesia။ Indonesia Invesments။4May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What is the G20?။ G20 (2017)။ 1 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Munawwaroh; Aprilia, Eka Utami (13 June 2011)။ SBY: Indonesia Will Be in the Top 10။ Embassy of Indonesia, Washington DC။ 26 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia's economy overview။ ASEAN Up (10 February 2016)။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia: Distribution of employment by economic sector from 2005 to 2015။ Statista (November 2017)။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၆.၀ ၁၃၆.၁ ၁၃၆.၂ Elias, Stephen; Noone, Clare (December 2011)။ The Growth and Development of the Indonesian Economy။ Reserve Bank of Australia။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia - Poverty and Wealth။ Encyclopedia of the Nations။ 14 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robison, Richard။ "A Slow Metamorphosis to Liberal Markets"၊ Australian Financial Review၊ 17 November 2009။
↑ ၁၃၉.၀ ၁၃၉.၁ Temple, Jonathan (15 August 2001)။ Growing into trouble: Indonesia after 1966။ University of Bristol။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ van der Eng, Pierre (4 February 2002)။ Indonesia's growth experience in the 20th century: Evidence, queries, guesses။ Australian National University။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Economic Outlook Database: Report for Selected Countries and Subjects - Indonesia။ International Monetary Fund (October 2017)။9January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kian Wie, Thee (25 September 2010)။ Indonesia's economy continues to surprise။ East Asia Forum။ 14 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IMF Survey: Indonesia's Choice of Policy Mix Critical to Ongoing Growth။ International Monetary Fund (28 July 2009)။5February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fitch Upgrades Indonesia's Rating to Investment Grade။ Jakarta Globe (15 December 2011)။ 8 January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Market Intelligence of Indonesia။ Hong Kong Trade Development Council (10 February 2015)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bland, Ben (5 August 2014)။ Indonesian economic growth lowest for almost five years။ Financial Times။9January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Unemployment Rate Indonesia Falls to 5.5% of Labor Force။ Indonesia Invesments (5 May 2016)။ 14 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Poverty in Indonesia: 10.86% of Indonesians is Poor (March 2016)။ Indonesia Investments (18 July 2016)။ 23 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Palm Oil။ Greenpeace။ 26 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia to replant 4.7m hectares of palm oil plantation။ UkrAgroConsult (30 August 2017)။ 27 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sarif, Edy (17 June 2011)။ Malaysia expected to maintain position as world's largest producer of Certified Sustainable Palm Oil။ The Star Online။ 18 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2017 Production Statistics။ Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles။ 8 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Localization။ PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia။ 29 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Demand for Instant Noodles။ World Instant Noodle Association (7 May 2018)။ 8 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Soebroto, Chris (2004)။ Indonesia OK!!: The Guide withaGentle Twist။ Galangpress Group။ p. 78။ ISBN 978-979-9341-79-2။
↑ Agustian, Widi (26 July 2016)။ PLN Terdepak, Pertamina pun Turun Peringkat di Fortune Global 500 (in id)။ Okezone Finance။ 23 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Length of Road by Surface, 1957-2015 (Km) (in id)။ Statistics Indonesia။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Koridor။ TransJakarta။ 15 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tristia Tambun, Lenny (25 January 2017)။ This Year, TransJakarta targets 185 million passengers (in id)။ Berita Satu။ 15 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MRT and LRT, Jakarta's New Rapid Transportation: Coming Soon။ Indo Indians (25 September 2017)။ 17 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alexander, Hilda B. (22 October 2016)။ Palembang LRT to begin operation in June 2018 (in id)။ Kompas။ 29 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Istianur Praditya, Ilyas (25 September 2017)။ Jakarta-Surabaya High-Speed Rail Project to begin in 2018 (in id)။ Liputan6။ 27 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ M. Razi Rahman (5 April 2014)။ Wamenhub: Indonesia bakal miliki 299 bandara။ Antara News။7November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Soekarno-Hatta world's 17th busiest airport။ The Jakarta Post။ 11 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Garuda Indonesia။ Skytrax။ 14 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Garuda Indonesia named World's Best Airline Cabin Crew။ Skytrax World Airline Awards (2017)။ 14 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၇.၀ ၁၆၇.၁ ၁၆၇.၂ Budiman, Arief; Das, Kaushik; Mohammad, Azam; Tee Tan, Khoon; Tonby, Oliver (September 2014)။ Ten ideas to reshape Indonesia's energy sector။ McKinsey&Company။ 30 March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Key World Energy Statistics။ International Energy Agency (2010)။ 11 October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statistik Ketenagalistrikan။ Kementerian ESDM (September 2016)။ 15 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Javed, Farhat; Asghar Nasim, Muhammad (2005)။ Construction of Seepage Measurement System at Jatiluhur Dam, Indonesia။ Electronic Journal of Geotechnical Engineering။3January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dr. Coyne & Bellier (9 October 2007)။ Jatiluhur in Indonesia (in French)။ Planete-TP။9November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Country Report: Indonesia။ Asian Development Bank။ 24 December 2004 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia seeking greater funding for R&D။ Oxford Business Group (29 August 2017)။ 14 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kasten, Michael။ History of the Indonesian Pinisi။9December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sertori, Trisha (11 December 2014)။ Man of 1000 shoulders။ The Jakarta Post။ 20 March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rika Stevani, Louis (4 February 2017)။ INKA to Manufacture Trains for Export to Bangladesh, Sri Lanka။ Tempo။ 15 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dwi Sutianto, Feby (5 February 2016)။ PTDI Ekspor 40 Unit Pesawat, Terlaris CN235 (in id)။ detikFinance။ 15 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Habibie receives honorary doctorate။ The Jakarta Post (30 January 2010)။5March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ KF-X Fighter: Korea's Future Homegrown Jet။ Defense Industry Daily (21 November 2017)။ 23 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mcelheny, Victor K. (8 July 1976)။ Indonesian Satellite to Be Launched။ The New York Times။2August 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Planning and Development of Indonesia's Domestic Communications Satellite System PALAPA။ Online Journal of Space Communication (2005)။ 18 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Satellites by countries and organizations: Indonesia။ N2YO။ 28 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Faris Sabilar Rusydi (17 June 2016)။ Lapan Target Luncurkan Roket Pengorbit Satelit Pada 2040 (in id)။ National Institute of Aeronautics and Space(LAPAN)။ 16 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Elliott, Mark (November 2003)။ Indonesia။ Melbourne: Lonely Planet Publications Pty Ltd.။ pp. 211–215။ ISBN 978-1-74059-154-6။
↑ Mapped: The World’s Dependency On Their Tourism Industries။ HowMuch (2018)။ 11 May 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tak Capai Target, Jumlah Kunjungan Wisman 2017 Hanya 14 Juta။ detik.com (1 February 2018)။ 1 February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Erwida, Maulia (6 January 2011)။ Tourism Ministry set to launch 'Wonderful Indonesia' campaign။ The Jakarta Post။ 12 March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Doubilet, David (September 2007)။ Indonesia Undersea။ National Geographic။6August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6August 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia - Properties inscribed on the World Heritage List။ UNESCO။ 27 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉၀.၀ ၁၉၀.၁ Indonesia။ World Economic Forum (2017)။ 29 May 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fifty years needed to bring population growth to zero။ Waspada Online (19 March 2011)။ 10 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Census 2010။ Statistics Indonesia (August 2010)။ 13 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia Population Projection။ Central Bureau of Statistics။ 30 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BBC: First contact with isolated tribes?။ Survival International (25 January 2007)။ 30 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nitisastro, Widjojo (2006)။ Population Trends in Indonesia။ Equinox Publishing။5September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population of Indonesia။ Indonesia Investments (5 September 2007)။ 24 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Population Prospect: 2017 Revision။ United Nations Department of Economics and Social Affairs - Population Division (21 June 2017)။ 20 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Krisetya, Beltsazar (14 September 2016)။ Tapping the Indonesian Diaspora Potential။ Forum for International Studies။ 20 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉၉.၀ ၁၉၉.၁ An Overview of Indonesia။ Living in Indonesia: A Site for Expatriates။ 14 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dawson, B.; Gillow, J. (1994)။ The Traditional Architecture of Indonesia။ London: Thames and Hudson Ltd.။ p. 7။ ISBN 978-0-500-34132-2။
↑ ၂၀၁.၀ ၂၀၁.၁ ၂၀၁.၂ Simons, Gary F. and Fennig, Charles D.။ Ethnologue: Languages of the World, Twenty-first edition။ SIL International။ 20 September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The History of Indonesian။ Language Translation, Inc.။4March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sneddon, James N. (April 2013)။ The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society။ University of South Wales Press Ltd.။ 29 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Anwar, Khaidir (1976)။ Minangkabau, Background of the main pioneers of modern standard Malay in Indonesia။9June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amerl, Ivana (May 2006)။ Language interference: Indonesian and English။ MED Magazine။ 29 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ van Nimwegen, Nico (2002)။ The Demographic History of the Dutch in the East Indies။ Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut။ 23 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Badan Pusat Statistik (multiple subsites) (in Indonesian)။ Badan Pusat Statistik။ 15 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2010 Census: Population by Region and Religion။ BPS (15 May 2010)။ 20 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yang, Heriyanto (August 2005)။ The history and legal position of Confucianism in post-independence Indonesia။ Marburg Journal of Religion။ 11 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Court recognises Indonesian native faiths in victory for religious freedom။ The Sydney Morning Herald (8 November 2017)။3December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sunni and Shia Muslims။ Pew Research Center (27 January 2011)။6May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (2017)။ 2016 Indonesia International Religious Freedom Report။ U.S. Department of State။ 19 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Oey, Eric (1997). "Bali". Periplus Editions.
↑ Leo Suryadinata (editor) (23 October 2008)။ Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia။ 20 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁၉.၀ ၂၁၉.၁ Ooi, Keat Gin (editor) (2004)။ Southeast Asia: A historical encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor (3 volume set)။ ABC-CLIO။ p. 177။ ISBN 978-1576077702။ CS1 maint: extra text: authors list (link)
↑ Magnis-Suseno, F. 1981, Javanese Ethics and World-View: The Javanese Idea of the Good Life, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, pp.15–18 ISBN 979-605-406-X, 2003 International Religious Freedom Report။ U.S. Department of State (2003)။ 13 January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Buddhism in Indonesia။ Buddha Dharma Education Association။ Buddha Dharma Education Association (2005)။3October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia - Bhineka Tunggal Ika။ Centre Universitaire d'Informatique။ 14 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About St Francis Xavier။ Catholic Archdiocese of Sydney။ 16 November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Barnes, R.H. (2008)။ Raja Lorenzo II: A Catholic kingdom in the Dutch East Indies။ University of Oxford။ 20 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Goh, Robbie B.H. (2005)။ Christianity in Southeast Asia။ Institute of Southeast Asian Studies။ p. 80။ ISBN 978-981-230-297-7။
↑ Indonesia - (Asia)။ Reformed Online။5December 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ al-Samarrai, Samer; Cerdan-Infantes, Pedro (9 March 2013)။ Awakening Indonesia's Golden Generation: Extending Compulsory Education from9to 12 Years။ The World Bank Blog။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tan, Charlene (2014)။ Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia။ Nanyang Technological University။ 27 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia: Education Expenditures။ UNESCO Institute for Statistics။ 21 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ QS World University Rankings။ QS Top Universities။ 19 June 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Andalas University။ Global Business Guide Indonesia။ 8 November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia's healthcare spending to balloon to$47.1b by 2022။ Healthcare Asia (20 April 2018)။ 26 August 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hasbullah Thabrany (2 January 2014)။ Birth of Indonesia’s ‘Medicare’: Fasten your seatbelts။ The Jakarta Post။ 10 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Republic of Indonesia Health System Review။ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies (2017)။ 29 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tadjoeddin, Mohammad Zulfan; Chowdury, Anis; Murshed, Syed Mansoob (October 2010)။ Routine Violence in Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspectives။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Upton, Stuart (January 2009)။ The impact of migration on the people of Papua, Indonesia: A historical demographic analysis။ University of New South Wales။ 10 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia's Rising Divide။ World Bank (7 December 2015)။ 14 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia: The population of Chinese Indonesians and Chinese Christians in the Sulawesi provinces and the cities of Medan and Banda Aceh; incidents of violence and state protection available။ Immigration and Refugee Board of Canada (17 March 2010)။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Setijadi, Charlotte (17 March 2016). "Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification". ISEAS Perspective 12 (2016). ISSN 2335-6677.
↑ ၂၄၉.၀ ၂၄၉.၁ Harvey, Adam (7 February 2018)။ UN rights chief warns 'intolerance' and political extremism making inroads in Indonesia။ ABC News။ 10 February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Knight, Kyle (27 January 2016)။ Dispatches: LGBT Backlash in Indonesia။ Human Rights Watch။ 31 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia's Aceh: Two gay men sentenced to 85 lashes။ BBC (17 May 2017)။ 23 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၅၂.၀ ၂၅၂.၁ Jill Forshee (2006)။ Culture and Customs of Indonesia။ Greenwood Press။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Henley, David (2015)။ "Indonesia"။ The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism။ The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism။ John Wiley & Sons, Inc.။ pp. 1–7။ doi:10.1002/9781118663202.wberen460။ ISBN 9781118663202။
↑ Indonesia - Intangible heritage, cultural sector။ UNESCO။ 21 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesian Arts and Crafts။ Living in Indonesia: A site for expats။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၅၆.၀ ၂၅၆.၁ ၂၅၆.၂ Forge, Anthony (1978)။ Balinese Traditional Paintings။ The Australian Museum။ 20 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesian Culture; Arts and Tradition။ Embassy of Indonesia, Athens (30 September 2010)။ 26 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Borobudur Temple Compounds။ UNESCO World Heritage Centre။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Reimar Schefold; P. Nas; Gaudenz Domenig, eds. (2004)။ Indonesian Houses: Tradition and Transformation in Vernacular Architecture။ NUS Press။ p. 5။ ISBN 978-9971-69-292-6။
↑ Harnish၊ David; Rasmussen၊ Anne, eds. (2011)။ Divine Inspirations: Music and Islam in Indonesia။ Oxford University Press။
↑ 'Keroncong': Freedom music from Portuguese descendants။ The Jakarta Post (16 June 2011)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Heryanto, Ariel (2008)။ Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics။ Routledge။
↑ Indonesia Tourism : The Dance and Theater in the Archipelago။ Indonesia Tourism။ 24 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ziyi, Xia (16 November 2011)။ Cultural feast at ASEAN Fair။ Xinhua။ 19 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၂၆၆.၀ ၂၆၆.၁ Jill Forshee, Culture and customs of Indonesia, Greenwood Publishing Group: 2006: ISBN 0-313-33339-4. 237 pages
↑ Indonesian Batik။ UNESCO (2009)။ 12 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About Indonesian food။ Special Broadcasting Service (13 May 2015)။ 21 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆၉.၀ ၂၆၉.၁ Natahadibrata, Nadya (10 February 2014)။ Celebratory rice cone dish to represent the archipelago။ The Jakarta Post။ 14 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Witton, Patrick (2002)။ World Food: Indonesia။ Melbourne: Lonely Planet။ ISBN 978-1-74059-009-9။
↑ Compared to the infused flavors of Vietnamese and Thai food, flavors in Indonesia are kept relatively separate, simple and substantial. Brissendon, Rosemary (2003)။ South East Asian Food။ Melbourne: Hardie Grant Books။ ISBN 978-1-74066-013-6။
↑ Cheung, Tim (12 July 2017)။ Your pick: World's 50 best foods။ CNN Travel။ 11 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Traditions, Wayang Wong Priangan: Dance Drama of West Java (2004)။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Maceda José။ Southeast Asian arts။ Encyclopædia Britannica။ 20 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dewangga, Kusuma (10 November 2013)။ Ketoprak: Javanese Folk Art (Part 1 of 2)။ Indonesia's Global Portal။ 13 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Indonesia - Theatre and Dance။ Encyclopædia Britannica။ 29 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pauka, Kirstin (1998). "The Daughters Take Over? Female Performers in Randai Theatre". The Drama Review 42 (1): 113–121. doi:10.1162/105420498760308706.
↑ Randai (Indonesian folk theater form, uses silat) « MIT Global Shakespeares။
↑ Hatley, Barbara (13 November 2017)။ Review: Indonesian post-colonial theatre။ Inside Indonesia။ 21 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kuhn, Annette (2012)။ A Dictionary of Film Studies။ Oxford/New York: Oxford University Press။ p. 229။ ISBN 978-0-19-958726-1။
↑ ၂၈၁.၀ ၂၈၁.၁ Sen, Krishna (2006)။ Giecko, Anne Tereska (ed.)။ Contemporary Asian Cinema, Indonesia: ScreeningaNation in the Post-New Order။ Oxford/New York: Berg။ pp. 96–107။ ISBN 978-1-84520-237-8။
↑ ၂၈၂.၀ ၂၈၂.၁ Kristianto, JB (2 July 2005)။ The Last 10 Years of Indonesia's Film Industry (in id)။ Kompas။ 13 January 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The State of Indonesia's Film Industry။ 21 December 1999 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Lee, Maggie (21 May 2017)။ World Notices Indonesian Film Resurgence။ Variety။ 24 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ History of Basketball in Indonesia။ National Basketball League Indonesia။ 8 September 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Widazulfia, Fahmiranti (3 May 2015)။7Boxing World Champions from Indonesia (in id)။ Good News from Indonesia။ 8 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Baldwin, Alan (18 February 2016)။ Haryanto becomes Indonesia's first F1 driver။ Reuters။ 27 December 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shannon L., Smith; Lloyd Grayson J. (2001)။ Indonesia Today: Challenges of History။ Melbourne, Australia: Singapore : Institute of Southeast Asian Studies။ ISBN 978-0-7425-1761-5။
↑ ၂၉၁.၀ ၂၉၁.၁ Kuipers, Joel C. "Post and Telecommunications".William H. Frederick and Robert L. Worden, editors (2011)။ Indonesia: A country study။ Library of Congress, Federal Research Division။ 15 March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ ကန့်သတ်ချက်မဲ့ လူထုပိုင်ဖြစ်သော ဤအကိုးအကားမှ အကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို ဤဆောင်းပါးတွင်ပါဝင်ဖေါ်ပြထားသည်။
↑ Phoning from home။ Globe Asia (30 August 2010)။ 27 March 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jennifer Yang Hui (2 December 2009)။ The Internet in Indonesia: Development and Impact of Radical Websites။ Routledge။ 12 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၉၄.၀ ၂၉၄.၁ Ai Lei Tao (25 April 2016)။ Indonesian internet users turn to smartphones to go online။ Computer Weekly။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Emanuel Kure (30 March 2015)။ Majority of Indonesian netizens aged 18-25 (in id)။ Berita Satu။ 13 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Czermak, Karin; Delanghe, Philippe; Weng, Wei။ Preserving intangible cultural heritage in Indonesia။ SIL International။9July 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9July 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nursisto (2000)။ Ikhtisar Kesusastraan Indonesia: dari pantun, bidal, gurindam hingga puisi kontemporer : dari dongeng, hikayat, roman hingga cerita pendek dan novel။ Adicita။ ISBN 978-979-9246-28-8။ [စာမျက်နှာ လိုအပ်]
↑ Seong Chee Tham (1981)။ Essays on Literature and Society in Southeast Asia: Political and Sociological Perspectives။ Kent Ridge, Singapore: Singapore University Press။ p. 99။ ISBN 978-9971-69-036-6။
↑ Author Pramoedya Ananta Toer dies။ BBC (30 April 2006)။ 23 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Joy Freidus, Alberta (1977)။ Sumatran Contributions to the Development of Indonesian Literature, 1920–1942။ Asian Studies Program, University of Hawaii။
↑ Indonesian Holidays။ Living in Indonesia: A Site for Expatriates (27 December 2017)။6January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ&oldid=740054" မှ ရယူရန်
အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။